PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: March 2010
နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးကိစ္စ နအဖနှင့် ၀တပ်...
ဖြိုခွင်းမှုသစ်များ လုပ်လာနိုင်ကြောင်း ဦးဝင်းတင်ြေ...
မတရားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများ ကန့် ကွက်ဆန္ဒပြအခမ်...
NLD ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အမေရိကန်နှင့် ကုလ အလေးထား ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ မှတ်ပုံမတင်ရေး...
လှုပ်ရှားမှုကြီး ရဲ့ အောင်ပွဲ နိဒါန်းကို စတင်လိုက်ပါ...
တိုင်းပြည်ကို ရာသက်ပန် စစ်ကျွန်ပြုမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကေ...
(၆၅)နှစ်မြောက် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အခ...
စစ်ဘေး စိုးရိမ်သည့် ၀ အရပ်သားရာချီ နေရပ်မှထွက်ခွာ ။
ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ဖို့ ဘာကျန်သေးလဲ ...
တရုတ် ဗဟိုလုံခြုံရေးအဖွဲ့ နေပြည်တော် ရောက်ရှိခဲ့ ။
ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း(၁၃၄)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ ...
ကိုးကန့်ဒေသ တည်ငြိမ်ရေး တရုတ်ကို နအဖ အကူအညီတောင်း။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဗမာ့နိုင်ငံရေး စာမျက်နှာသစ် (...
Real Mandalay Thar
ဆန္ဒပြသူများ နယူးဒေလီ မြန်မာသံရုံးကို တိုက်ခိုက် ။
အန်အယ်ဒီ နှစ်ခြမ်းကွဲမှာ စိုးရိမ်မှုများ ထွက်ပေါ် ။
ပြည်သူ့စစ် အခြေခံတိုက်ပွဲဝင်သင်တန်း များမြစ်ကြီးနာ...
စစ်အစိုးရနှင့် ကချင်အကြား တင်းမာမှု ပိုလာ ။
ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှု စတင် ။
မြောက်ပိုင်းသို့ တပ်ရုပ်ပြန်ရန် တောင်ပိုင်း ၀ တပ်မ...
ရတခတိုင်းမှူးနှင့် မွန်ပြည်သစ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ တွေ့ဆုံ ။
ရွှေဂုံတိုင် ကြေညာချက် ပြန်သုံးသပ်မည် ။
စစ်အစိုးရကို ဖိအားပေးရန် ယူအန်အေ က ဘန်ကီမွန်းထံ စာ...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ရန် ကေအန်ယူ တိုက်တွန်း။
ကျိုင်းတုံတွင် MIG (29) များရောက်ရှိကာ နအဖ စစ်ရေးပြ ။
ရခိုင်အင်အားစုများ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက် ။
နိုင်ငံရေးပါတီ သို့မဟုတ် လူမှုအစည်းအရုံးတခုအဖြစ် ကေ...
ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို လက်မခံကြရန် AIPMC တိုက်တွန်း ။
သင်္ကြန်အမြောက်လုပ်ဟန် နှင့် တရုတ်ထံပေးစာ ။
ကင်တားနား၏ မတ်လအစီရင်ခံစာ ။
တရုတ်နယ်စပ် အပစ်ရပ်ဒေသများ အခြေအနေတင်းမာ ။
ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့ရန် အမ်ပီယူ တောင်းဆို။
(၂၂)နှစ်မြောက် မြန်မာနိူင်ငံ လူအခွင့်အရေးနေ့အထိမ...
မီဇိုး ၀ါးညှပ်အက ဂင်းနစ် စံချိန်တင် ။
ရွေးကောက်ပွဲ အတုအယောင်အဖြစ် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေ ဝေဖန်။
နအဖ တပ်မများ ၀ နယ်အနီး ပိုမိုဖြည့်တင်းချဉ်းကပ် ။
သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၏ ဘာလဲဟဲ့လူ့ငရဲ စာအုပ် ဖြ...
မြန်မာစစ်ရာဇ၀တ်မှု စုံစမ်းရေး ကင်တားနား တောင်းဆို။
ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ မနက်ဖြန် ထွက်မည်ဟု မြန်မာရုပ်မြင...
ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ နိုင်ငံတကာ ဝေဖန် ။
တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေ ရွေးကောက်ပွဲဝ...
၀ အား နအဖ အင်အားသုံး ခြေမှုန်း တော့မည်လော ။
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်ေ...
နိူင်ငံတကာရောက် ကရင်လူမျိုးများမှ နအဖ အာဏာရှင်စနစ်...
ထောင်ကျအတိုက်အခံ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ရန် စစ်အစိုးရ တာ...
စစ်အစိုးရ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ထုတ်ပြန် ။
နယ်ခြားစောင့်တပ် လက်မခံသည့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ မတရား...
မြန်မာစစ်တပ်ထိုးစစ် ကရင်လူထု အိုးအိမ်ပစ် ထွက်ပြေးရ ။
ကမ္ဘာ့လူငယ် ခေါင်းဆောင် ဇိုရာဖန်းနှင့် စကားစမြည် ။
စစ်အစိုးရက ဝ တပ်ဖွဲ့ကို မတရားအသင်း ကြေညာမည်ဟု သတင်...
စစ်တပ် အကြမ်းဖက်ခံ မြန်မာအမျိုးသမီးများအရေး ဘန်ကီမ...
ဇိုယာဖန်း ကမ္ဘာ့လူငယ် ခေါင်းဆောင် ရွေးချယ်ခံရ ။
ရမခ တိုင်းမှူးအား အပစ်ရပ် SSA ဥက္ကဌ တဦးတည်းသွားတွေ့ ။
လူမှုရေးအကူအညီ ယူရို (၁၇) သန်း မြန်မာနိုင်ငံကို အီး...
၀ နယ်ခြားတလျှောက် တရုတ် တပ်အင်အား ထောင်ချီ ဖြည့်ထား။
နအဖ စစ်ဗျူဟာမှူး - ဒေသခံ ရိုးရာ စာပေ နှင့် စကားသုံး...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တိုကျိုမြို့ 
နအဖ ငြင်းပယ်ထားသည့် တောင်းဆိုချက်များ ထပ်မံတင်ပြ၍ ...
AUN-Japan ၏ ပုံမှန်လပတ်အစည်းဝေး မှတ်တမ်းပုံများ။
ချီလီငလျင်ဘေး အသက်မသေ ပိတ်မိနေသူများ ရှာဖွေ ။
အန်အယ်လ်ဒီ၏ မူလနိုင်ငံရေးမပျက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဟု ဦးဝင်းတင် ပြောကြား။
အဖွဲ့ချုပ် ဖျက်သိမ်းခံရလျှင် အဖွဲ့ချုပ်ပျက်စီးသည်ဟု မယူဆ၊ ပျက်စီးခြင်းမဟုတ်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မှာကြားချက် အတိုင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) က ချမှတ်ထားသည့် နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်များအရ နိုင်ငံရေး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ဦးဝင်းတင်က ပြောကြားသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ မူရင်း khitpyaing.org News,
နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးကိစ္စ နအဖနှင့် ၀တပ်ဖွဲ့ မနက်ဖြန် တွေ့ဆုံမည် ။
ယမန်နှစ်၊ ဧပြီလ (၂၈) ရက်မှစတင်၍ အပစ်ရပ်အဖွဲ့များအား နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရန် နအဖဘက်က ပြောဆိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်အဖြစ် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလကုန်ရက်ဟု လည်းကောင်း၊ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်ရက်ဟု လည်းကောင်း၊ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ရက်ဟု လည်းကောင်း အကြိမ်ကြိမ်သတ်မှတ်နေခဲ့ရာမှ ယခု တနှစ် တင်းတင်းပြည့်မြောက်မည့် ဧပြီလ (၂၈) ရက်နေ့ကို နောက်ဆုံးရက် သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ မူရင်း .khitpyaing.org/news
ဖြိုခွင်းမှုသစ်များ လုပ်လာနိုင်ကြောင်း ဦးဝင်းတင်ပြော ။
Fresh crackdown in offing: Win Tin
ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း။ မူရင်း mizzimanewsTV
မတရားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများ ကန့် ကွက်ဆန္ဒပြအခမ်းအနား(တိုကျို)။
၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လ(၃၀)ရက်။
ယနေ့မတ်လ ၃၀ ရက် နေ့တိုကျိုမြို့ ရှီနာဂါဝါရှိ နအဖ စစ်အခွန်ရုံး (သံရုံး)ရှေ့ တွင် နအဖ စစ်အုပ်စု၏ မတရားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများ ကန့် ကွက်ဆန္ဒပြခြင်းနှင့် ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မူ (၈၂) လပြည့် ၀မ်းနည်းခြင်းအခမ်းအနား ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ဂျပန်ဌာနခွဲ့ မှဦးစီးကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနာမှူးအဖြင့် NLD-La(JB) အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်မင်းထွန်းမှ ယနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး တက်ရောက်လာကြသည့် အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးတို့ မှ တာဝန်ရှိသူများတို့ ကလည်း နအဖ၏ အမတရားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများကို ကန့် ကွက်ရှုတ်ချခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်းအနားကို ညနေ ၃း၀၀ နာရီ မှ ၄း၀၀ နာရီ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိူင်ငံရောက် ဒီမိုကရေစီအင်အားစု စုစုပေါင်း (၂၀၀)ကျော်ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဧရာဝတီ Tuesday, March 30, 2010 .
သတင်းမှတ်တမ်း။ မူရင်း irrawaddy.org
မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့အား ဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့်က ပဉ္စမအကြိမ် နောက်ဆုံးဒက်လိုင်းရာဇသံထပ်ပေး ။
“ဗိုလ်ရဲမြင့်က မိုင်းလားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ ၂၈ ရက်က တွေ့ဖို့လှမ်းခေါ်တယ်။ လာမယ့် ဧပြီလ ၂၈ တကယ့် နောက်ဆုံး အချိန်ထပ်ပေးမယ်၊ အသွင်ပြောင်းရင်ပြောင်း မပြောင်းရင် ဘာညာပေါ့၊ မိုင်းလားကိုယ်စား လှယ် အဖွဲ့ကတော့ ဘာဆိုဘာမှ ပြန်မပြောရဘူး”- ဟုအမည်မဖေါ်လိုသည့် ကျိုင်းတုံစစ်တိုင်းရုံးအသိုင်းအ၀ိုင်း နှင့်ဝင်ဆန့်သူတဦးက ပြောပါသည်။
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့် ဖိတ်ခေါ်ချက်အရ ဒုဥက္ကဌ (၂) စ၀်ဆန်လူ၊ ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် စ၀်ခမ်းမောင်၊ ကျိုင်းတုံရှိ မိုင်းလား အဖွဲ့ရုံးတာဝန်ခံ စိုင်းစိုးဝင်း အပါအ၀င် မိုင်းလား ကိုယ်စားလှယ် ၈ ဦး မတ်ခ်ျ ၂၉ ရက် မနက်ပိုင်းက တြိဂံစစ် တိုင်းရုံးသို့ ရောက်ရှိပြီး စရဖ အရာရှိချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်နှင့် တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဖြိုးတို့အား သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့သည် ဟုဆို၏။ ထို့အတူ UWSAပန်ဆန်းဌာနချုပ်အားလည်း ဧပြီ ၁ ရက် တန်ယန်းသို့ သွားတွေ့ရန် မှာကြားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
“ဧပြီ ၂၈ ရက်က တကယ့်နောက်ဆုံး သတ်မှတ်ရက်တဲ့၊ မပြောင်းလို့ အဲဒီ့ဒက်လိုင်းကုန်သွားရင်တော့ ၁၉၈၉ မတိုင်ခင် အနေအထားအတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုဘဲ။ ဆိုလိုတာက မတရားအသင်းဖြစ်သွားမယ်ပေါ့။ ဗိုလ်ရဲမြင့်က တိုတို တုတ်တုတ် ပြောပြီးခြိမ်းခြောက်တယ်”- ဟု ထိုင်းနယ်စပ်ရောက် ပန်ဆန်းကုန်သည်တဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောပါသည်။
အသွင်ပြောင်းရေးအတွက် မူအားဖြင့် လက်ခံထားသည့် မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့၏ တောင်းဆိုချက် ၆ ချက်ကိုလည်း ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အကြုံးမ၀င်ဟုဆိုကာ ပါယ်ချခဲ့သည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရန် မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့အား နအဖ မှ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ၍ ယခုအကြိမ် (ဧပြီ ၂၈ ရက် ) နောက်ဆုံး သတ်မှတ်ရက်ပေးခြင်းမှာ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက်ဖြစ်၏။ ပထမ အကြိမ်- အောက်တိုဘာ ၂၀၀၉၊ ဒုတိယ အကြိမ် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉၊ တတိယအကြိမ် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၀၊ စတုတ္ထအကြိမ်က မတ်ခ်ျ ၁၀ ရက်နေ့ ဖြစ်ပြီး ယခု ပဉ္စမအကြိမ် နောက်ဆုံးဒက်လိုင်းမှာမူ တကယ့်ဒက်လိုင်းဖြစ်သည်ဟု ပြော၏။ အပစ်ရပ်များ ယခုအခြေအနေအတိုင်း ဆက်လက် ခေါင်းခါ ငြင်းဆန်သွားလျှင် နောက်နောင်လည်း ဒက်လိုင်းအများပြားရှိဦးမည်ဟု သုံးသပ်သူများ လည်းရှိသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း။ မူရင်း သျှမ်းသံတော်ဆင့်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ မှတ်ပုံမတင်ရေး ကန့်ကွက်မဲမရှိ ဆုံးဖြတ် ။
NLD ပါတီ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး။
မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၀။
စစ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေဟာ တရားမျှတခြင်း မရှိတဲ့အတွက် NLD ပါတီအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရေးအတွက် ထပ်မံ မှတ်ပုံတင်တော့မှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း ဒီနေ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဗဟိုဦးစီး စည်းဝေးပွဲက ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ NLD ပါတီ ရှေ့ ဆက်လက် ရပ်တည်ရေး အပါအ၀င် ဒီနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ စည်းဝေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပါတီ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးကို ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ဦးတင်ဦးက အခုလို စပြောပါတယ်။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ မူရင်း VOA News
လှုပ်ရှားမှုကြီး ရဲ့ အောင်ပွဲ နိဒါန်းကို စတင်လိုက်ပါပြီ။
ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း က CC အများစုက ကန့်ကွက်ကြတဲ့
နေကြတော့ ၊မဲမခွဲရဲတော့ ဘဲ Mandate တွေကိုသုံးမယ်လုပ်ပါတယ်။ နဂိုပေးထားတဲ့ Mandate
ပါတီဝင်တော်တော်များများက ကန့်ကွက်ကြတဲ့ အတွက် မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုကို မပြုလုပ်တော့ပဲ
အများဆန္ဒအရ မှတ်ပုံမတင်ရေးကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ ဒီကနေ့အစည်းအဝေးသို့
ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေ ကျန်းမာရေးကြောင့်မလာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေသည်
မှတ်ပုံတင်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါသည်.။ အတွင်းရေးမှူး ဦးလွင်၊
ယနေ့ ၂ နာရီအချိန် သတင်းရရှိသည့် အခြေအနေများအရ
တိုင်း (၇) တိုင်း၊ ပြည်နယ် (၇)ခုက ကိုယ်စားလှယ်များ ၊ အီးစီ၊ စီအီးစီ
တို့၏ ယနေ့ ပါတီမှတ်ပုံတင်သင့် မတင်သင့် ကို ၀ိုင်းဝန်းဆုံးဖြတ်
မဲပေးကြရာ ပါတီမှတ်ပုံမတင်ရေးကို ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အပြတ်အသတ်
ဆုံးဖြတ် အတည်ပြုလိုက်ကြောင်း ကြားသိရသည်။ ယနေ့အစည်းအဝေးတွင် ဦးအောင်ရွှေ
တဦးမှအပ စီအီးစီ၊ စီစီ ၁၁၀နှင့် လူငယ်ငါးဦး စုစုပေါင်း ၁၁၅ ဦး
ယင်းအစည်းအဝေးတွင် ဦးဝင်းတင်က.. “ရွေးကောက်ပွဲအတွက်
မှတ်ပုံမတင်ဘူးဆိုရင် ပါတီအနေနဲ့ ခြေပြတ်မယ်.. လက်ပြတ်မယ်..
မှတ်ပုံတင်မယ်ဆိုရင်တော့ ခေါင်းပြတ်မယ်.. ခြေပြတ်တာ လက်ပြတ်တာ အတု လုပ်
ပြီး အလုပ်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်.. ခေါင်းပြတ်သွားရင်တော့
ခေါင်းအတုလုပ်လို့မရဘူး.. ”ဟု ပြတ်ပြတ်သားသား မိန့် ကြား ခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်အထိ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များ၊ လူငယ်များ နှင့် ပြည်သူလူထု
၅၀၀ ကျော်သည် အဖွဲ့ချုပ် ရုံးရှေ့ တွင် အခြေအနေကို
စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိနေပြီး နအဖ ဘက်မှ လုံခြုံရေးများလည်း အများအပြား
၀န်းရံစောင့်ကြပ်လျက် ရှိနေသည်။ ယနေတက်ရောက်သူ အဖွဲ့ဝင်တဦးက…
“ကျမတို့ ပါတီ ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား သိရပြီ.. ရှေ့ ကျမတို့
ဆုံးဖြတ်ကြမယ်..လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ဆက်လုပ်သွားရမယ်.. ရှေ့ကို
ကျမတို့ ရဲရဲရင့်ရင့် ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်စရာရှိတာတွေ လုပ်ရတော့မယ်..” ဟု
သို့သော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် မနက်ဖြန် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ထိ
ဆက်လက် ဆွေးနွေးသွား မည်ဖြစ်ပြီး ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား
အဖြေရှာ ဆောင်ရွက်ဖွယ်ရှိသည်ဟု လူထုက မျှော်လင့်လျက်ရှိ
“ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး ကြေငြာချက် .......
ပြည်တွင်းမှ ပေးပို့ လာသည့် သတင်း
Posted by PNSjapan at 7:40 PM0comments
ရွေးကောက်ပွဲ ဒေါ်စုပါဝင်ခွင့် မရှိရင် ဂျပန်က စီးပွားရေးကူညီမှု ရပ်ဆိုင်းမည် ။
ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကတ်ဆုယာ အိုကာဒါ။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ မူရင်း “ VOA News ”
တိုင်းပြည်ကို ရာသက်ပန် စစ်ကျွန်ပြုမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်သည့် အခမ်းအနား(တိုကျို)။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့အစည်း (AUN-Japan)မှကြီးမှူး၍ နအဖစစ်အုပ်စု စစ်အာဏာတည်မြဲပြီး တိုင်းပြည်ကို ရာသက်ပန် စစ်ကျွန်ပြုမည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေကို အတည်ဖြစ်စေမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာဥပဒေ(၅)ရပ်နှင့် နည်းဥပဒေများအား ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်သည့် အခမ်းအနားတရပ်အား တိုကျို Toshimaku မြို့ နယ် Minami Otsuka Da Ichi ခမ်းမ၌ ညနေ ၆း၀၀ နာရီ မှ ၉း၀၀ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ၂၀၀၈ ဇွတ်အတင်း အတည်ပြုခဲ့သည့် နာဂစ် ဥပဒေကို အတည်ပြုမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ သည် မြန်မာပြည်သူ တရပ်လုံးအတွက် အကျိုးမပြုသည်သာမက တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုအသီးသီး၏ အမျိုးသား တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌန်းခွင့် ရရှိရေးတို့ ကိုလည်း မျက်ကွယ် ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြစ်ဆိုသော် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်သည် နအဖစစ်အုပ်စု စစ်အာဏာ တည်မြဲပြီးကို ဥပဒေအရ အခိုင်အမာ သက်သေ ထူရန်သာဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ယနေ့၂၀၁၀ ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲ သည် ယနေ့ပြည်သူများ ရင်ဆိုင်နေရသော အထွေထွေ အကျပ်အတည်းများကို ပြေလည် ဖြေရှင်နိူင်မည့် အဖြေ မဟုတ်သည့်အတွက် ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲအား ရှုတ်ချကန့် ကွက်သွားကြရန်နှင့် ပြုလုပ်လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကိုလည်း နိူင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်မပြုကြရန် ရည်ရွယ်ကျင်းပ ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
အခမ်းအနား အစီအစဉ်၌် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို အတည်ပြုမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား မိမိတို့၏သဘောထားများကို ရှုဒေါက် အမျိုးမျိုးဖြင့် ဆွေးနွေးကာ ကန့်ကွက် သွားခဲ့ကြပါသည် ။တက်ရောက်လာကြသည့် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့မှလည်း ကန့်ကွက် ပြောကြားသွားခဲ့ကြသည့်အပြင် မိမိတို့၏ ဆန္ဒသဘောထားပါဝင်သည့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် တစ်စောင်ကို အများ၏ ဆန္ဒသဘောထား ရယူကာ သဘောထား ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဤအခမ်းအနားတွင် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် ပြည်ထောင်စုဘွား တိုင်းရင်းသားအင်အား စုများ စုစုပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ခန့် တက်ရောက်ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။
Posted by PNSjapan at 10:17 PM0comments
(၆၅)နှစ်မြောက် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား(တိုကျို)။
၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လ(၂ရ)ရက်။
ယနေ့ကျရောက်သည့် မတ်လ(၂ရ)ရက်နေ့ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ရှီနာဂါဝါအရပ်ရှိ မြန်မာစစ် အခွန်ရုံး(သံရုံး)ရှေ့ တွင် ညနေ ၃း၀၀ နာရီ ၄း၀၀ နာရီ အထိ မြန်မာနိုင်ငံသား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ(JAC)မှ ဦးဆောင်ကျင်းပပြုလုပ်ပြီး ဂျပန်နိူင်ငံရောက် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။
ယနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ၊ လူထုလူတန်းစားပေါင်းစုံ၊ နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်းစုံတို့မှ ကျစ်လစ်ခိုင်မာသွေးစည်းညီညွတ်မှုဖြင့် ဖက်ဆစ်အာဏာရှင်တို့အား ရဲဝင့်စွာ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသော ၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့သည့် သမိုင်းဝင်တော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားဖြစ်သည်။
လွတ်လပ်ရေး၏ ဗိသုကာရှင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအ၀င် ရဲဘော်သုံးကျိပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားမျိုးချစ် ညီနောင်အပေါင်းတို့က ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့အား တွန်းလှန်ခဲ့သော မတ်လ (၂၇)ရက်နေ့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့အား တပ်မတော်နေ့အဖြစ် ခေါ်ယူသုံးစွဲနေခြင်းမှ ရပ်တန့်ပြီး တရားဝင် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့အဖြစ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ခေါ်ယူပေးဖို့ ရှင်းလင်းပြောကြားသွားပါသည်။
တက်ရောက်လာကြသော အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးမှ တာဝန်ခံများကလည်း ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီး ဂျပန်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား အင်အားများ စုစုပေါင်း ၁၈၀ ကျော်ခန့်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါသည်။
Posted by PNSjapan at 7:18 PM0comments
နယ်ခြားစောင့်တပ် လက်မခံကြောင်း မွန်ပြည်သစ် ထပ်မံဆုံးဖြတ် ။
နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရန် မြန်မာစစ်အစိုးရက တောင်းဆိုထားသည့်ကိစ္စကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ယခင်ဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်း လက်မခံဘဲ ပယ်ချရန် ထပ်မံဆုံး ဖြတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ပါတီရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ရေးချောင်းဖျားရှိ ၎င်းတို့၏ ဗဟိုဌာနချုပ်၌ ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ(၁၈) ရက်မှစ၍ ယနေ့အထိ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး ကျင်းပနေဆဲဖြစ်ပြီး ယင်းအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးပါက သက်ဆိုင်ရာ စစ်အစိုးရအရာရှိထံ အကြောင်းကြား သွားမည်ဟု နိုင်ခြေးမွန်က ပြောသည်။
စစ်အစိုးရက ဖျက်သိမ်းထားသော ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရပါတီ မွန်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်း လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ(၂၄) ရက်နေ့က ထပ်မံအတည်ပြု ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ မူရင် ...ခေတ်ပြိုင် ဂျာနယ်
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး၊ Force - ၁၃၆ … ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ကြေးနန်းနှစ်စောင် ။
မင်းဟန် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မတ်လ ၂၄ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၅၁ မိနစ် .
(၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် ၆၅ နှစ်မြောက် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့သို့…..)
ပထမတွင် ….ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးကြီးအား မတ်လ၂၅ရက်နေ့တွင် စတင်ရန် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက သတ်မှတ်ထား၏။
သို့သော်…. အင်္ဂလိပ် စစ်တပ်များအား ခုခံတိုက်ခိုက်ရန်၊ ဂျပန်စစ်ဌာနချုပ်က ဗမာ့တပ်မတော်ကို၊ ‘စစ်အမိန့်’ ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့သည့်အတွက် …ပထမ သတ်မှတ်ထားခဲ့သော ရက်အား ပြင်ဆင်ခဲ့ကြရသည်။ မတ်လ ၂၅ ရက်မှ…. ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့သို့ ပြောင်းလဲလိုက်၏။
တော်လှန်မည့်နေ့ ‘ဒီ ဒေး’ အပြောင်းအလဲ ရှိသကဲ့သို့ …စစ်တိုင်း ၁ ၏ စစ်ရေး ခေါင်းဆောင်နှင့် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် အပြောင်းအလဲ များလည်း ရှိ၏။
မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင်မူ ….. တပ်မတော်နှင့် တော်လှန်ရေးအား ဆန့်ကျင်ပြီး ဂျပန်တို့နှင့် ပူးပေါင်းလိုသည့် ဗိုလ်မှူးရန်နိုင် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်၊ ဒေါက်တာ ဘမော်၏ သားမက်) ၏ သတင်းပေး မှုကြောင့် ဂျပန်စစ် ဘက်ဌာနက သိရှိသွားပြီး တပ်မတော်၏ လှုပ်ရှားမှုများအား အရေးယူစုံစမ်းလာ၏။ ပဲခူးရှိ တိုင်း ၄ တွင် လက်နက်များ သိမ်းယူမည်အထိ အခြေစိုက်လာ၏။ ဤတွင် ….. တပ်မတော်အနေနှင့် ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးအား လက်ဦးမှု ရယူနိုင်ရန်အတွက် …. တော်လှန်ရေး စတင်မည့် ရက်နှင့် အချိန်အား အရေးပေါ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်ရ၏။ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးကြီး စတင်မည့် နေ့ရက်…
‘ဒီ-ဒေး’ ကား …၁၉၄၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်….။ စတင်မည့်အချိန် ‘န-နာရီ’ က … ၁၉းဝဝ နာရီ…။
၁၉၄၅ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၃၁ ရက်…။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဗဟိုစစ်ဦးစီးဌာနချုပ်အား ကံမမြို့နယ် ပုဏ္ဍားရွာတွင် အခြေစိုက်ထားပြီး၊ ဗိုလ်မှူးအောင်၏ တိုင်း ၇ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က …. မင်းတုန်းမြို့နယ် ကစွန်းမြောင်ရွာ အနီးရှိ လယ်တဲငယ် တခုတွင် ယာယီ အခြေပြုထားသည်။ ပုဏ္ဍားရွာနှင့် ကစွန်းမြောင်ရွာများက ခြေလျင်ခရီးနှင့် ၄ မိုင် ခရီးမျှသာဝေး၏။
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး မစတင်မီကတည်းမှပင် ဆင်းမလားရောက် ဗြိတိသျှများနှင့် ဖဆပလ သည် အဆက်အသွယ် ရရှိထားခဲ့၏။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် အိန္ဒိယရှိ သခင်သိန်းဖေ (စာရေးဆရာ သိန်းဖေမြင့်) ၏ အဆက်အသွယ်ဖြင့် ဖဆပလ နှင့် Force - ၁၃၆ အကြား စစ်ရေးအရ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု ရှိနေ၏။ ကြိုးမဲ့ ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေး တပ်သားများအား Force - ၁၃၆ မှ လေထီးနှင့် ဖက်ဆက် တော်လှန်ရေး စစ်တိုင်းကြီးများတွင် ချပေး၏။ စစ်တိုင်းများ အားလုံးတွင်မူ မဟုတ်…။ ဗိုလ်မှူးအောင်၏ တိုင်း ၇ တွင် ရှိ၏။ သခင်သန်းထွန်း၊ ကိုဗဟိန်းတို့ အခြေပြုထားသည့် ပဲခူးရိုးမအရှေ့ခြမ်းတွင် ရှိ၏။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ တိုင်း ၂ တွင် ရှိ၏။ တိုင်း ၂ တွင်က ….သခင်စိုးနှင့် ဗိုလ်မှူးကြီးနေဝင်းတို့ တာဝန်ယူကြ၏။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးစီးသည့် ဗဟိုစစ်ဦးစီးဌာနချုပ်တွင်က မရှိ….။ တိုင်း ၇ နှင့်တွဲ၍ သုံးရသည်။
မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့၊ နံနက်မှာပင် ဗိုလ်ချုပ်တို့ တိုင်း ၇ စစ်ဌာနချုပ်ရှိရာ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ ကစွန်းမြောင်ရွာ အနီးရှိ လယ်တဲတခုသို့ ရောက်ရှိလာကြ၏။ ဗိုလ်ချုပ်နှင့်အတူ…. ဗိုလ်မှူးမင်းခေါင် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်) ဗိုလ်မှူးထွန်းအုံ (မြူနီစပယ်မင်းကြီး၊ အငြိမ်းစား)၊ ဗိုလ်မှူးစမိုက် (ဗိုလ်မှူးကြီး လှအောင်) ၊ ဗိုလ်မှူးဖိုးကွန်း (ပြည်သူ့ရဲဘော်၊ အငြိမ်းစား၊ ဆိုဗီယက် သံအမတ်ကြီး) တို့လည်း လိုက်ပါလာကြသည်။
တပေါင်းနွေ၏ မွန်းတည့်နေက ပူပြင်းလွန်းလှ၏။ အပူရှိန်ကြောင့် သက်ကယ်မိုးသည် တဖျစ်ဖျစ်နှင့် မြည်နေ၏။ ညိုခြောက်နေသည့် ရိုးပြတ်တောအား ဖြတ်၍တိုက်ခတ်လာည့်လေကား…. လေပူ….။ တဲအရှေ့ရှိ လက်ပံပင်အိုညီနောင်က တပင်လုံး အပွင့်နီနီရဲရဲများနှင့် အနီရောင် ချယ်ထား၏။ လေပူအဝှေ့ကြောင့် လက်ပံပွင့်တို့က လေဟုန်စီး၍ မြေသို့ ဝဲ၍ …ဝိုက်၍ သက်ဆင်းနေကြ၏။ မြေပြင်ပင်ရင်းတွင်လည်း ရဲရဲ…။
တဲအတွင်း၌က …. ဗိုလ်ချုပ်၊ ဗိုလ်မှူးအောင်၊ ဗိုလ်မှူးစိန်မှန်၊ ဗိုလ်မှူးထွန်းအုံ၊ ဗိုလ်မှူးမင်းခေါင်နှင့် သခင်တင်မြတို့ ထိုင်နေကြ၏။ ဗိုလ်ချုပ်သည် Force - ၁၃၆ ၏ တပ်ဖွဲ့မှူးမှ သူ့ထံသို့ ပေးပို့လိုက်သည့် ကြေးနန်စာအား ဖတ်နေသည်။ ကြေးနန်စာအား ဖတ်ရင်း ဗိုလ်ချုပ်သည် ‘ဟန်းကော’ အတွင်းမှ ရေနွေးကြမ်းပူပူအား တခွက်ပြီး တခွက် သောက်၍နေ၏။ ကြေးနန်စာအား ဖတ်နေသည့် ဗိုလ်ချုပ်၏ မျက်နှာသည် …. တင်းမာမှုများနှင့် …။ တင်းမာနေသော ဗိုလ်ချုပ်၏မျက်နှာက …. တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပင် …ဒေါသမထွက်…။
Force - ၁၃၆ က (ဖဆပလ) အား ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးတွင် သူတို့၏ ပြောက်ကျားတပ်၊ သတင်းပေး အဆင့်နှင့်သာ ဆက်ဆံချင်၏။ ဖက်ဆစ်ဝင်ရိုးတန်း အင်အားစုအား စစ်ရေးအရ မဟာမိတ်ပြု၍၊ တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေး ပြည်သူ့ တပ်မတော်အဖြစ် (ဖဆပလ) အပေါ် သဘောမထားလို..။ ပြီးလျှင် … လေထီးနှင့် ချပေးထားသည့်၊ ကြိုးမဲ့ကြေးနန်း ဆက်သွယ်ရေး စက်များကိုလည်း Force - ၁၃၆ နှင့်သာ ဆက်သွယ်ရမည်။ အခြားစစ်တိုင်းများနှင့် အချင်းချင်း မဆက်သွယ်ရဟူ၍ ကန့်သတ်ထား၏။ လက်နက်နှင့် ခဲယမ်းမီးကျောက်များအား ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် လေထီးနှင့် ချပေးမည့် အစီအစဉ်ကိုလည်း ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးကြီး စတင်သည့် အချိန်အထိ မချသေး…။ ဤတွင် … တိုင်း ၇ ၏ ဒုတိယ စစ်ရေးခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးစိန်မှန် ပေါက်ကွဲလေ၏။ မဟာမိတ်တပ်မျာအား ‘ငါ ’ နှင့် ကိုင်တုတ်ဖူး၏။
“ဒီမအေပေးတွေဆီက လက်နက်မရရော ဂျပန်ကို မတိုက်နိုင်တော့ဘူးလား။ ရှိတဲ့လက်နက်နဲ့ ဂျပန်တွေ ဖင်သနီလန်ကုန်အောင် တိုက်ပြမယ်။ ဂျပန်တင်မကဘူး ဒင်းတို့ကိုပါ တိုက်ပြမယ်။ … နယ်ချဲ့သမားတွေ”
ဗိုလ်ချုပ်သည် ကြေးနန်းစာအား အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ဖတ်၏။ ပြီးလျှင် ….အနီးတွင် ထိုင်နေသည့် ဗိုလ်မှူးစိန်မှန်အား…။
“ကဲ… အားလုံးကြားရအောင် ဒီကြေးနန်းကို ဗိုလ်စိန်မှန်က ဖတ်ပြလိုက်စမ်းပါ”…ဟု ဗိုလ်ချုပ်က လက်အတွင်းမှ ကြေးနန်းစာအား ဗိုလ်မှူးစိန်မှန်သို့ လှမ်း၍ပေး၏။
ကြေးနန်စာက ….မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် တိုင်း ၇ စစ်ဒေသသို့ ဗိုလ်ချုပ်တို့ ရောက်ရှိနေသည့် အကြောင်းအား Force - ၁၃၆ သို့ ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် အကြောင်းကြားခဲ့သည့် ကြေးနန်းစာအပေါ် Force - ၁၃၆တပ်ဖွဲ့မှူးမှ ဗိုလ်ချုပ်ထံသို့ အကြောင်းပြန်လာသည့် ကြေးနန်းစာ ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်မှူးစိန်မှန်က ….ဗိုလ်ချုပ်လှမ်းပေးသည့် ကြေးနန်အား အသံမြှင့်၍ ဖတ်ပြ၏။
“Major General Aung San (Self Styled)”…
“မေဂျာဂျင်နရယ်ဟု မိမိကိုယ်မိမိ ဘွဲ့ပေးထားသူ အောင်ဆန်း…”
ဗိုလ်မှူးစိန်မှန်သည် ကြေးနန်းစာ၏ ပထမတကြောင်းအား ဖတ်ပြီး…ဆက်၍ မဖတ်။ ရပ်လိုက်၏။ ပြီးလျှင် …. ဒေါသနှင့် …။
“ဒါဟာ ကျနော်တို့ကို စော်ကားတာပဲ ဗိုလ်ချုပ်။ ဒီကောင်တွေ လူပါးကို ဝတယ်။ ကျနော်တို့ကို သူတို့ရဲ့ ကျွန်တွေပဲလို့ ထင်နေတုန်းပဲနဲ့ တူတယ်”
အားလုံးက … Force - ၁၃၆ ၏ ကြေးနန်းတွင် ရေးထားသည့် ပထမဆုံး စာကြောင်းကြောင့်၊ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်၍ နေကြ၏။ မကျေနပ်ကြ…။
“ဗိုလ်ချုပ်ကို ဒီလို အမည်တပ်ရေးတာဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ စော်ကားကာတာတင် မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ရဲ့ တော်လှန်ရေးကိုရော…။ တမျိုးသားလုံးကိုပါ စော်ကားရာကြတာပဲ”။ သခင်တင်မြက ဝင်ပြော၏။
“ ကဲပါလေ ဆုံးအောင်ဖတ်ပြီးမှ ထင်မြင်ချက် ပြောကြတာပေါ့။ ဆက်ဖတ်စမ်းပါ”
ဗိုလ်ချုပ်က …စကားစအား ဖြတ်၍ ဆက်ဖတ်ရန် အမိန့်ပေး၏။ ဗိုလ်မှူးစိန်မှန်သည် အံတတြိတ်ကြိတ်နှင့် ကြေးနန်းအား ဆက်၍ဖတ်၏။
“သင့်ထံမှ ကြေးနန်းကို လက်ခံရရှိသည်။ လက်ဖတင်နယ်ကာနယ် ကရူးအား ဖြူးအနောက်တွင် လေထီးနှင့် ချပေးပြီး ယခု သခင်သန်းထွန်းနှင့် အတူရှိနေသည်။ A.F.O နှင့် ပူးတွဲဆောင်ရွက်မည့် တပ်ဖွဲ့ Force - ၁၃၆ မှ အရာရှိအားလုံးကို ကာနယ်ကရူးက အုပ်ချုပ်လိမ့်မည်။ ဂျပန်အား ထိရောက်စွာ တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် A.F.O လက်အောက်ရှိ သင်အုပ်ချုပ်နေသော လက်နက်ကိုင်တပ် အားလုံးသည် မဟာမိတ်စစ်ဌာနချုပ်၏ စစ်အမိန့် ညွှန်ကြးချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်သည်။ သင်၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိနေသော မင်းဘူး၊ မကွေး၊ သရက်ဒေသများရှိ သင်တို့၏ လက်နက်ကိုင်တပ်များသည် ဂျပန်များကို ထိရောက်စွာ တိုက်နိုင်မည်မဟုတ်။ သို့ကြောင့် ဤဒေသရှိ သင်၏ တပ်များကို ပြည်၊ သာယာဝတီ၊ အင်းစိန် မီးရထားလမ်းတလျှောက်သို့ အမြန်ဆုံး ပြောင်းရွှေ့၍ မဟာမိတ်စစ်ဌာနချုပ်၏ ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင် ဂျပန်ကို စစ်ဆင်ရန် ဖြစ်သည်။ သင်၏ တပ်များအားလုံး ထိုဒေသသို့ ရောက်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိများနှင့် လိုအပ်သော ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာများကို လေထီးဖြင့် ချပေးမည်။ သင်တို့ လိုအပ်သော လက်နက်ခဲယမ်း၊ ဆေးဝါးနှင့် စစ်ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ရေးကို ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိများက ဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မည်။ သင်၏ သဘောထား အကြောင်းပြန်ပါ”
ကြေးနန်းက ဤတွင် ဆုံးပြီ….၊ အားလုံး၏ ရင်အတွင်းမှ ဒေါသမီးအပူက …တပေါင်းနွေနှင့် အပြိုင်…။ ဗိုလ်ချုပ်သည် သူ၏ တပ်မှူးများအား ဝေ့၍ကြည့်ပြီး…. တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နှင့်ပင် စကားအား ဆို၏။
“ဒီမှာ ကိုယ်တို့ ဂျပန်ကို ထချတာဟာ သူတို့အလိုကို လိုက်လျောဖို့၊ သူတို့က အသိအမှတ်ပြုတာကို ရချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အလုပ်အဖြစ် ကိုယ်တို့ ဆန္ဒအလျောက် ဂျပန်ကို ထတော်လှန်ကြတာပဲ။ အဲဒီတော့ သူတို့က ကိုယ်တို့ကို အသိအမှတ်မပြုချင်၊ လေးလေးစားစား မဆက်ဆံချင်လည်း ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တို့အဖို့ ပြည်သူလူထုကို စည်းရုံးနိုင်သလောက် ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ဂျပန်ကို ချနိုင်သလောက် ကမ္ဘာက ကိုယ်တို့ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကို အသိအမှတ် ပြုလာမှာပဲ။ ဒီအင်္ဂလိပ်တွေကိုလည်း သိပ်မမျှော်လင့်နဲ့။ သူတို့ဟာ နယ်ချဲ့သမားတွေဆိုတာလည်း မမေ့နဲ့။ ကဲ .. သူတို့ဆီကို ကိုယ်တို့ရဲ့ သဘောထား အမြန်ဆုံး ပြန်ပို့ရမယ်။ အဲဒီကြေးနန်း အခုပဲ ရေးလိုက်မယ်”
ဗိုလ်ချုပ်၏ စကားဆုံးသည်နှင့် တဲအတွင်း၌ ခဏငယ်မျှ တိတ်ဆိတ်၍သွား၏။ ဗိုလ်ချုပ်သည် ‘ဟန်းကော’ အတွင်းမှ ရေနွေးကြမ်းပူပူအား ငှဲ့၍ သောက်၏။ ပြီးလျှင် ….စာရွက်လွတ်တရွက်ပေါ်၌ ကြေးနန်းစာအား ချ၍ရေး၏။
ဖ တ ပ လ အဖွဲ့ချုပ်
သင်တို့ထံမှ ပေးပို့သော…. နေ့စွဲပါ ကြေးနန်းကို ရရှိပါသည်။ ဂျပန်အား ထိရောက်စွာ တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် မင်းဘူး၊ မကွေး၊ သရက် ဒေသများရှိ ကျွန်ုပ်တို့ တပ်များအားလုံး ပြည်၊ သာယာဝတီ၊ အင်းစိန် ဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့၍ စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပါ ဟူသော သင်တို့၏ အကြံပေးချက်ကို လက်မခံနိုင်ပါ။ ပြည်၊ သာယာဝတီ၊ အင်းစိန် ဒေသများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိ ဗမာ့အမျိုးသားတပ်မတော်မှ တပ်ရင်းအချို့နှင့် ပြောက်ကျားတပ်အချို့ တပ်ဖြန့်စစ်ဆင်လျက်ရှိပါသည်။ ဖ တ ပ လ အဖွဲ့ချုပ်မှ ချမှတ်ထားသော စစ်ဆင်ရေး အစီအစဉ်အတိုင်း ဂျပန်ဖက်ဆစ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ တပ်များက တိုက်ခိုက်ရင်း သင်တို့၏ မဟာမိတ်တပ်များနှင့် စစ်မျက်နှာများတွင် ပူးတွဲတိုက်ခိုက်သွားလိုသည်။
သို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာ ဖက်ဆစ်ဂျပန်များကို ထိရောက်စွာ စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော စစ်ရေးအစီအစဉ်များကို သင်တို့နှင့် ညှိနှိုင်းရေးဆွဲရန် သင်တို့ထံမှ ဆက်သွယ်ရေးအရှာရှိ တယောက် ကျွန်ုပ်ထံ အမြန်ပို့ပေးစေလိုသည်။ လောလောဆယ်အားဖြင့် သင်တို့ ပေးမည်ဟု ကတိပြုထားသော လက်နင်ခဲယမ်းနှင့် ဆေးဝါးစစ်ပစ္စည်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ ညွှန်ပြသည့် နေရာများသို့ အမြန်ဆုံး ချပေးစေလိုသည်။
လက်နက်ခဲယမ်းကို အမြန်ဆုံး လေထီးနှင့်ချပေးရမည့်တပ်များနှင့်ဒေသမှာ
(၁) ဗိုလ်ကြီးစိန်ဝင်း ခေါင်းဆောင်သော တပ်ရင်း ၆ ၊ မင်းတုန်းအရှေ့ဒေသ။
(၂) ဗိုလ်ကြီးစန်းယု ခေါင်းဆောင်သော တပ်ရင်း ၂ ၊ မင်းတုန်း ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသ။
(၃) ဗိုလ်ကြီးမိုးညို ခေါင်းဆောင်သော စက်မှုလက်မှု တပ်ရင်း၊ မင်းဘူးဒေသ။
(၄) ဗိုလ်မင်းလွင် အုပ်ချုပ်သော တိုင်း ၇ ဌာနချုပ်၊ ကင်းတပ်ခွဲ
အမြန်အကြောင်းပြန်ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်သည် သူ၏ကြေးနန်းအား အဆုံးသတ်လိုက်၏။
လေအသွေ့ကြောင့်….တဲအရှေ့ရှိ လက်ပံပင်ညီနောင်မှ လက်ပံပွင့်တို့က …. လေဟုန်စီး၏။ ဝေလည်း ရဲရဲ….။ ကြွေလည်း ရဲရဲ…..။
“… ရင့်ကြွေ ညောင်းသည်
ရွက်ဟောင်း စွန့်ပစ်၊ ဘဝသစ်သို့
အနီထဲမှ ကြယ်ဖြူပွင့် … ”
အညွှန်း။ ။ သခင်တင်မြ၏ ဘုံဘဝမှာဖြင့် (ဆဋ္ဌမတွဲ)
ဆောင်းပါး မူရင်း ( mizzimaburmese. )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ခွင့်ပြုဖို့ ဘန်ကီမွန်း တိုက်တွန်း ။
မြန်မာစစ်အစိုးရက ကျင်းပမယ်လို့ ကြေညာထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် သက်ဆိုင်သူတွေ အားလုံးကို ပါဝင်ခွင့်ပေးဖို့နဲ့ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ဖြစ်နိုင်မယ့် အခြေအနေတွေကို ဖန်တီးပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း (Ban Ki-moon)က မြန်မာ စစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာ့အရေး မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ အဖွဲ့ အစည်းအဝေးကို နယူးယောက်မြို့၊ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနချုပ်မှာ ကျင်းပပြီးတဲ့နောက် အတွင်းရေးမှူးချုပ်က အဲဒီလို တိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ မြန်မာလူထု တရပ်လုံးအတွက် တည်ငြိမ်မှု၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလားအလာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ရာ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ အားလုံး ပါဝင်နိုင်ဖို့နဲ့ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုရှိဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ မြန်မာ့အရေး မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ အဖွဲ့က အလေးအနက် ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက ပြောပါတယ်။ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှု လုပ်ဆောင်ကြဖို့ သက်ဆိုင်သူ အားလုံးကို ဒီအဖွဲ့က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
“ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ သက်ဆိုင်သူတွေ အားလုံး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပါဝင်ခွင့်ရမယ့် အခြေအနေတွေကို အစိုးရက ဖန်တီးပေးရပါမယ်။ ဒီအခြေအနေတွေထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံးကို လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ အခြေခံ လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို လေးစားလိုက်နာဖို့ ဆိုတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့သဘောအရ ဆိုရင်တော့ သူ ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) အနေနဲ့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေး ကိစ္စကို စဉ်းစားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောထားပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ စဉ်းစားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောထားတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ပါတီက ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အတိုင်း လိုက်နာမယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
လက်ရှိ အခြေအနေတွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီး၊ သူ့ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ယုံကြည်မှုပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ပြောတာဆိုရင်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မိမိတို့ လေးစားပါမယ်လို့ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်ခွင့်မရဘူး ဆိုရင်တော့ ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ လက်ခံနိုင်စရာရှိမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကို ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ထပ်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
“နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ၊ အထူးသဖြင့်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ အပြည့်အ၀ ပါဝင်ခွင့်မရဘူး ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ ယုံကြည် လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့၊ အားလုံးပါဝင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေအဖြစ် ယူဆနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေကို ကျနော် ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံး၊ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အားလုံးကို ကျနော်တို့ ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်သွားရပါလိမ့်မယ်။”
မြန်မာစစ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ့် ၀န်းကျင် အခြေအနေ တခုလုံးဟာ အားလုံးပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ် တခုအတွက် လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေကို အခုချိန်ထိ အပြည့်အ၀ မရောက်သေးဘူးလို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက ပြောပါတယ်။
မြန်မာလူထုအတွက် ပိုပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ လူနေမှု အဆင့်အတန်း ရလာရေး လုပ်ဆောင်သွားဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတာကိုလည်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ အဖွဲ့က အလေးအနက် ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ မစ္စတာဘန်က ပြောပါတယ်။ မြန်မာ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ အဖွဲ့ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလက စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။ ဒီအဖွဲ့ထဲမှာ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အမြဲတမ်း အဖွဲ့ဝင် ၅ နိုင်ငံနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများ အဖွဲ့ဝင် ASEAN နိုင်ငံတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီအဖွဲ့ရဲ့ ကြာသပတေးနေ့က ကျင်းပတဲ့ အစည်းအဝေး မတိုင်ခင် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာ့အရေး ယာယီ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ဗီဂျေး နမ်ဘီယာ (Vijay Nambiar) က တင်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။
ဧပြီလကျရင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့မှာ ကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး အတွင်းမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကိစ္စဟာ အဓိက ဆွေးနွေးမယ့် အကြောင်းအရာတခု ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံထုတ်၊ ဂျကာတာပို့စ် သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးကို ဧပြီလ ၈ ရက်နဲ့ ၉ ရက်နေ့တွေမှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျကာတာပို့စ် သတင်းအရ ဆိုရင်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ခွင့်ပြုရေး အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေက မြန်မာစစ်အစိုးရကို စည်းရုံး နားချကြဖို့ ရှိပါတယ်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာ အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ လက်ရှိ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ် ၀န်ကြီးချုပ် ငုယင် တန် ဒန်း (Nguyen Tan Dung) ဟာ ဧပြီလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ဖို့ စီစဉ်ထားပြီး သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ ဆွေးနွေးမယ်လို့ ခန့်မှန်းရကြောင်း AFP သတင်းတပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာတီ နာတာလ်ဂါဝါ (Marty Natalegawa) ဟာလည်း မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ဖို့ စီစဉ်ထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေနဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကို ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သတင်းမှတ်တမ်း။ VOA News
မြန်မာနိုင်ငံအရေး လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် တံခါးပိတ်ဆွေးနွေး ။
NEJ/ ၂၅ မတ် ၂ဝ၁ဝ
စစ်အစိုးရက ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကိစ္စများအပါအ၀င် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ မတ်(၂၄)ရက်တွင် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၌ တံခါးပိတ် အစည်းအဝေးတရပ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးကို မစ္စတာဘန်ကီမွန်းနှင့် မြန်မာ့အရေး မိတ်ဆွေ နိုင်ငံများအဖွဲ့တို့ အစည်းအဝေးမတိုင်မီ တရက်စောပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးအပြီး ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ မတ်ဂရန့်က မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေသစ်နှင့်ပတ်သက်၍ လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် အတော်များများက စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ကြသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း အေအက်ဖ်ပီ သတင်းတွင် ဖော်ပြသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများသည် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းက မျှော်လင့်ထားသည့် လွတ်လပ် တရားမျှတသည့် ဖြစ်စဉ်များနှင့် ကင်းကွာနေပြီး ယခင်လုံခြုံရေး ကောင်စီက ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကြေညာချက်များအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိဟုလည်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခင် ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်များက မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးရန်၊ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်နှင့် အခြေအနေကောင်းများ ဖန်တီးပေးရန် တောင်းဆိုတင်ပြခဲ့သည်။
ယခု မတ်လ(၈)ရက် နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် နအဖစစ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေတွင် ထောင်ဒဏ် ကျခံနေရသူများသည် ပါတီ ၀င်ဖြစ်ခွင့်မရှိဟု ဖော်ပြထားသည်။
ထိုသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး လီဘောင်းဒေါင်ကမူ မြန်မာနိုင်ငံသည် အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နိုင်ငံ တခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကိစ္စသည် သူ့နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေး ကိစ္စသာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ ဆင်းရဲသည့် နိုင်ငံတခုအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်းသည် လွယ်ကူသည့် ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်း၊သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲသည် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အလွန် အရေးကြီးသည့် ခြေလှမ်း တရပ်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂလုံ ခြုံရေးကောင်စီ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရွေးကောက်ပွဲ နှင့်ပတ်သက်၍ အခြေအနေကောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် အပြုသဘောဖြင့် ကူညီသွားကြရန် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း မစ္စတာ လီဘောင်းဒေါင်က ပြောကြားသွားသည်။
ထိုသို့ တရုတ်သံအမတ်ကြီး၏ ပြောဆိုချက်ကို ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးက“ကျနော်တို့ သဘောမတူပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ တရားဝင်ဆွေးနွေးရေး အစီအစဉ်မှာ သတ်မှတ်ထားပါတယ်” ဟုသတင်းထောက်များကို ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာအစိုးရ ယခုထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေသည် လွတ်လပ်တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်စေမည် မဟုတ်ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အန်အယ်လ်ဒီပါတီကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မှတ်ပုံမတင်နိုင်ရန် ရေးဆွဲထားသည်ဟုလည်း မစ္စတာ မတ်ဂရန့်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ဖြစ်လာမည့် မတည်ငြိမ်မှု များဖြစ်လာပါက နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ထိပါး ခြိမ်ခြောက်မှုတခု ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောကြားသွားကြောင်း သိရသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၌ မြန်မာ့အရေးကို နောက်ဆုံးအကြိမ် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ယခုပထမဆုံး အကြိမ် ပြန်လည် ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု ပြင်ဆင်လျှောက်ထားချက်ကို ဗဟိုတရားရုံးက ငြင်းပယ်သည့်ကိစ္စ၊ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ အစီရင်ခံစာပါ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
မတ်(၂၅)ရက်တွင်လည်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက မြန်မာ့အရေး မိတ်ဆွေ နိုင်ငံများအဖွဲ့နှင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ရှိကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာ့မိတ်ဆွေ များအဖွဲ့တွင် သြစတြေးလျ၊ ဗြိတိန်၊ တရုတ်၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ပြင်သစ်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂျပန်၊ နော်ဝေး၊ ရုရှ၊ စင်ကာပူ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ ပါဝင်ကြသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ မူရင်း “ခေတ်ပြိုင် ဂျာနယ်”
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်နိူင် ။
မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအများအပြားက မြန်မာ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မှုကို ဖော်ပြ ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ ဗြိတိန်သံအမတ်က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ကောင်စီထဲမှာကိုက မြန်မာ့အရေးအပေါ် သဘောထား ကွဲလွဲမှုတွေ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ရှိနေတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ပြဿနာတွေ ပြေလည်သွားအောင် လုံခြုံရေးကောင်စီက တကယ်တမ်း ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာလား ဆိုတာကတော့ ခုချိန်ထိ အဖြေမထွက်သေးတဲ့ မေးခွန်းတခုအဖြစ်ပဲ ဆက်ရှိနေပါသေးတယ်။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ VOA News
NEJ/ ၂၄ မတ် ၂ဝ၁ဝ
မြန်မာနိုင်ငံအရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မတ်လ(၂၄)ရက်နေ့ ယနေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၌ ဆွေးနွေးပွဲတရပ် ပြုလုပ်မည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးရန်ကိစ္စကို မတ်(၂၃)ရက်တွင် ကျင်းပသည့် အစည်းဝေးတွင် လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက ယမန်နေ့၌ သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက ယခုလ (၈)ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးသွားဖွယ် ရှိသော်လည်း ယခုလောလောဆယ် အခြေအနေတွင် လုံခြုံရေးကောင်စီအနေဖြင့် တစုံတရာဆုံးဖြတ်ချက် ချမည်မဟုတ်ကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်နိုင်ရန် တားမြစ်သော စစ်အစိုးရ ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက မနက်ဖြန်တွင် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် အဓိကနိုင်ငံများနှင့် ဆွေးနွေးရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာ့မိတ်ဆွေများအဖွဲ့က မြန်မာ့အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မနက်ဖြန် ကြာသပတေးနေ့တွင် ဆွေးနွေးကြမည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် မာတင် နက်စကီးက ယမန်နေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာ့မိတ်ဆွေများအဖွဲ့တွင် သြစတြေးလျ၊ ဗြိတိန်၊ တရုတ်၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ပြင်သစ်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂျပန်၊ နော်ဝေး၊ ရုရှ၊ စင်ကာပူ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ ပါဝင်ကြသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ မူရင်း “ ခေတ်ပြိုင် ဂျာနယ် ”
Wednesday, 24 March 2010 18:50 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
နအဖ စစ်တပ်နှင့် သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) ရှိ ၀ ပြည်သွေးစည်းရေး ပါတီတို့ကြား စစ်ရေးတင်းမာ နေချိန် တွင် ၀ ထိန်းချုပ် နယ်မြေအတွင်းရှိ ၀ ဒေသခံ ၃၀၀ ခန့်သည် ယခုအပတ်အတွင်း နေရပ်မှ ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာ နေကြောင်း သိရသည်။
၀ ဋ္ဌာနချုပ်ရှိရာ ပန်ဆန်းနယ်တ၀ိုက်မှ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူ အများစု ပါဝင်သည့် ၀ အရပ်သားများက ၀ တပ်ဖွဲ့ နယ်မြေ၏မြောက်ပိုင်း နအဖစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ရာ နမ့်တစ်၊ ဟိုပန် ၊ ချင်းရွှေဟော် နယ်ခြားဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့ နေကြောင်း ချင်းရွှေဟော်ဒေသခံ ကုန်သယ်တစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
“အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေအများစုပါတယ် စစ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီး စိုးရိမ်လို့ ဒီဘက်ပေါ့နော် ထွက်ပြေးလာကြ တယ် သူတို့က တရုတ်ပြည်ထဲလည်း သွားနေလို့မဖြစ်ဘူးလေ အခက်အခဲရှိတာပေါ့ များသောအားဖြင့် အတွင်း ပိုင်းဘက်ပဲ ပြေးလာကြတယ် ၃၀၀ ကျော်လောက်ရှိတယ် ” ဟု ဆိုသည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အဆိုပါ ဒေသများသို့ ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာသည့် ၀ အရပ်သားများအား နအဖ စစ်တပ်မှနေရာချ ထားခြင်း ရှိမရှိ မသိရသော်လည်း နီးစပ်ရာ ဆွေမျိုးများထံ နေထိုင်ကြကြောင်း အဆိုပါကုန်သယ်အ ပြောအရ သိရသည်။
ထိုသို့ ၀ နယ်မြေအတွင်းမှ အရပ်သားများ ထွက်ခွာနေချိန်တွင် ၀ ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ သည့် နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာနမှ နအဖ ၀န်ထမ်းများအား မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ က ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နအဖ စစ်တပ်၏ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့စည်းရေး အဆိုကို ၀တပ်ဖွဲ့က လက်မခံသဖြင့် စစ်ရေးတင်းမာနေသည့် တိုင်အောင် ၀ တပ်ဖွဲ့အား မြန်မာစစ်တပ်က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ဖွယ်မရှိသေးကြောင်း ၀ တပ်ဖွဲ့နှင့်နီးစပ်သူ တစ်ဦး က ဆိုသည်။
“တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက် စစ်ရေးပြင်ဆင်နေတာတော့ မှန်တယ် ဒါပေမဲ့ နအဖရဲ့ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဟာက တ ကယ် တိုက်ခိုက်ဖို့ထက် ဟန်ရေးပြ ခြိမ်းခြောက်တာ ဖြစ်ဖို့များတယ် အခုနောက်ဆုံး ၀န်ထမ်းတွေ အကုန်ပြန် ခေါ်တယ် ဒါတွေအားလုံးက ဗျူဟာခင်းနေတာ လောလောဆယ်မတိုက်နိုင်သေးဘူး ” ဟု ဆိုသည်။
လတ်တလော မြန်မာစစ်တပ်က ၀ တပ်ဖွဲ့အပေါ် သဘောထား တင်းမာနေပြီး နအဖ စစ်တပ်မှ စတင် တိုက်ခိုက် လာပါက ၀တပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် တွန်းလှန်ရန် ပြင်ဆင်မှုရှိကြောင်း တရုတ်နယ်စပ်စစ်ရေးနိူင်ငံရေး လေ့လာသူ ဦး အောင်ကျော်ဇောက ဆိုသည်။
“ ၀ ကို ပထမ ပစ်မှတ်ထားတယ် အခု ဗမာစစ်တပ်က ၀ ပြိုအောင် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ထိန်းချုပ်မှုတွေ လုပ်နေ တယ် အဲလိုခြိမ်းခြောက်ထားတော့ ၀ ဘက်ကလည်း အသင့်ပြင်မှုတွေလုပ်ထားရတယ် ၀ ကိုတိုက်တာ ကိုးကန့် ကို တိုက်တာနဲ့မတူဘူး ၀ တပ်ဖွဲ့ရဲ့ စိတ်ဓါတ် အင်အားအပေါ်မူတည်ပြီး တိုက်ဖို့ရာ ခက်တယ် ” ဟု ဆိုသည် ။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့က သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) တန့်ယန်းမြို့တွင် နအဖ၏ စရဖချုပ် ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့် နှင့် ၀တပ်ဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌပေါက်ယူချမ်း ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ နောက်ဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့သော် လည်းနယ်ခြား စောင့်တပ်ဖွဲ့စည်းရေးအဆိုကို ၀ ဘက်မှ လက်မခံကြောင်း သိရသည်။
ဟန်လေး Monday, March 22, 2010
irrawaddy.org/bur မှ ဟန်လေး ၏ ကာတွန်း လက်ရာ
Tuesday, 23 March 2010 18:31 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
တရုတ်နိုင်ငံတော် ဗဟိုလုံခြုံရေးဋ္ဌာ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် နအဖမြို့တော်သစ် နေပြည်တော်နှင့်ရန်ကုန်မြို့ များသို့ ယခုတစ်ပတ်အတွင်း သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း စုံစမ်း သိရသည်။
အဆိုပါခရီးစဉ်အတွင်း တရုတ်-ဗမာ နှစ်နိူင်ငံ နယ်စပ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများအတွက် နအဖ ဘက်မှ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး မှုခင်းစုံစမ်းရေးဋ္ဌာနမှ အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း နအဖအာဏာပိုင်များနှင့် နီးစပ်သူ တစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ ပြောသည်။
မတ်ခ်ျ ၂၂ ရက်နေ့တွင် တရုတ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့သည် နေပြည်တော်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာပြီး နအဖ အာဏာပိုင် များ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) ကိုးကန့်ဒေသ လောက်ကိုင်မြို့သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာကြောင်း သိရသည်။
“မနေ့ကတော့ မန္တလေးကနေ ထွက်လာတာ လားရိူးရောက်ပြီ ဗမာအာဏာပိုင်တွေ ဖိတ်ကြားချက်အရ လားရှိုးကနေ လောက်ကိုင်ကို ဆက်သွားမယ်၊ လောက်ကိုင်မြို့ အခြေအနေ လိုက်ပြမှာပေါ့ ”ဟု နီးစပ်သူက ပြောသည်။
၂ဝဝ၉ သြဂုတ်လကုန်ပိုင်းက ဦးဖုန်ကျားရှင်း ခေါင်းဆောင်သည့် ကိုးကန့်အထူးဒေသ (၁)တပ်ဖွဲ့အား နအဖ စစ်တပ်က ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့အပြီး မတည်မငြိမ် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည့် ကိုးကန့်ဒေသကို လိုက်လံပြသခြင်း ဖြစ်ဖွယ်ရှိ ကြောင်း တရုတ်နယ်စပ်မှ အကဲခတ် တစ်ဦးကဆိုသည်။
၂ဝ၁ဝ ဇန်နဝါရီလပိုင်းအတွင်း ယခင်ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများက တာရွှေထန်ရှိ နအဖစစ်စခန်းတစ်ခုကို ဝင်ရောက် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ နအဖဘက်မှ စစ်သည် ၂ ဦးသေဆုံး၍ ၁ ဦးဒဏ်ရာရခဲ့သည်။
ထို့အပြင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်နှင့် ယခု၂ဝ၁ဝ အတွင်း ကိုးကန့်ဒေသ လောက်ကိုင်မြို့ပေါ်တွင် ဗုံးများ ဆက်တိုက် ပေါက်ကွဲခဲ့ရာ တရုတ်နိူင်ငံသားများ အပါအဝင် လူ ၁ဝ ဦးထက်မနည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။
နောက်ထပ် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာ မတ်ခ်ျ ၁ဝ ရက်က လားရှိုးမြို့ အမှတ် ၇ ရပ်ကွက်တွင် နယ်ခြားစောင့်တပ် လက်ခံသည့် ကိုးကန့် အဖွဲ့ ဆက်သွယ်ရေး တာဝန်ခံ ဦးလီစန်း လုပ်ကြံခံခဲ့ရသည်။
ထိုအခြေအနေများကြောင့် ကိုးကန့်ခေါင်းဆောင်သစ် ဦးပိုင်ဆုံချိန် မိသားစုမှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း နေထိုင် လျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း(၁၃၄)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ နှင့် ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့ အထိမ်းအမှတ် ကဗျာရွတ်ပွဲ(တိုကျို)။
ဂျပန်ရောက် စာပေနှင့်ကဗျာ ၀ါသနာရှင်များက ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ (၁၃၄)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့နှင့် ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့ ကိုဂုဏ်ပြုသော အားဖြင့် "ရွှေဒေါင်းတောင် ကလောင်အဖိုးမွေးနေ့နှင့် ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့"ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲ တခုကို မတ်လ(၂၂)ရက်နေ့ ညနေပိုင်း၌ တိုကျိုမြို့၊ မြန်မာအများစု နေထိုင်ရာ တာကာဒါနိုဘာဘာ ရပ်ကွက်ရှိ ကွန်စူးမားစင်တာခန်းမ(၄)ထပ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကဗျာနှင့်စာပေ ၀ါသနာရှင် (၆၀)ကျော်ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကို အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သူ မလေးလေး(တိုကျို)မှ စာပေတင့်မှ လူမျိုးမြင့်မယ် ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း မြန်မာ့စာပေ သမိုင်းမှာ ကြည်ညို ထိုက်သူ၊ ပူဇော် ထိုက်သူများကို အောက်မေ့ဖွယ် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ပြုလုပ်ခြင်းဟာ မင်္ဂလာတရားတော် နှင့်ညီကြောင်း ပြည်တွင်းတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မလုပ်နိုင်သည့် ကိစ္စများကို ပြည်ပရောက် စာပေချစ်မြတ်နိုး သူများမှ ရောက်ရာဒေသတွင် ဆထက်တံပိုး လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုတယ်ဟု ယူဆမိသည့်အတွက် ယခုအခမ်းအနားကို ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းနှင့် မြန်မာ့ စာပေနယ်ပယ်တွင် စာပေသြဇာ အာဏာကြီးမားခဲ့သော မြန်မာ့စာပေ ဥသျှောင်ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်သည့် ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ မတ်လ(၂၃)ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် ၁၃၄ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အထိမ်း အမှတ်အဖြစ် ဆရာကြီး ရေးဖွဲ့ခဲ့သော ကဗျာ၊ လေးချိုး၊ ဒွေးချိုးများနှင့် ဆရာကြီးကို ခေတ်အဆက်ဆက် စာပေနှင့် ကဗျာ ပညာရှင်များ ဂုဏ်ပြုရေးဖွဲ့ စပ်ဆိုထားသည့် ကဗျာများကို ရွတ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲသို့ အမေရိကားရောက် ကဗျာဆရာကြီး မောင်စွမ်းရည်က သ၀ဏ်လွှာပေးပို့ခဲ့ပြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ အထုပ္ပုတ္တိကို စီစဉ်သူ တဦးဖြစ်သည့် အလင်းအိမ်မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာရဲငြိမ်းက ဖတ်ပြရှင်းလင်းခဲ့သည်။ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ ထင်ရှား လှသောကဗျာ လင်္ကာများစွာထဲမှ လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါဝင် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံခံရပြီးနောက် ဆရာကြီးကိုယ်တိုင် များစွာ တုန်လှုပ်ခံစား ခဲ့ရသည့်အတွက် ရေးဖွဲ့သီကုံးခဲ့သော "အာဇာနည်ဗိမာန်"လေးချိုးကြီးကို မြန်မာအမျိုးသမီး သမဂ္ဂ(ဂျပန်)ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ချိုချိုအေးမှ အသံအနေအထား မှန်ကန်စွာနှင့် ငိုချင်းဖွဲ့ရွတ်ဆိုဂုဏ်ပြုခဲ့ရာ တက်ရောက် သူပရိတ်သတ်များအတွက် အာဇာနည်နေ့ကို ပြန်ပြောင်း အောင့်မေ့ သတိရစေသည်အထိ နှစ်ချိုက်စွာအားပေးခဲ့ကြသည်။
ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲသို့ ပြည်တွင်းမှ သတင်းစာဆရာကြီး လူထုဦးစိန်ဝင်းမှလည်း တယ်လီဖုံးဖြင့် အမှာစကားပြောကြား ပေးခဲ့ပြီး ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းသည် ခေတ်အဆက်ဆက် တိုင်းရေး ပြည်ရာများတွင် စာပေ၏ အခွင့်အာဏာကို အသုံးပြု၍ ပြည်သူတို့အား မျိုးချစ်စိတ်၊ တိုင်းပြည် ချစ်စိတ်တို့ကို ပေးခဲ့ပုံနှင့် ကဗျာနှင့် နိုင်ငံရေး ခရိးအကြောင်းကို ကဗျာဆရာ ကိုညိုထွန်း(ခ)ဦးသိန်းငွေမှ ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသည်။
ဒီနောက်တွင် ဂျပန်ရှိမျိုးဆက်သစ် လူငယ်ကဗျာ ဆရာများက ခေတ်အဆက်ဆက်က စာပေပညာရှင်များက ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း အတွက် ဂုဏ်ပြုရေးဖွဲ့ထားသော ကဗျာများထဲမှ ၄င်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကဗျာများဖြင့် ရွတ်ဆိုဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီး စာပေပညာရှင် ဦးသန်းဆွေ(မြေနီကုန်း)က "မြန်မာ ကဗျာအကြောင်း တစေ့တစောင်း"ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေး ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
"ပထမတော့ မြန်မာကဗျာရဲ့ စုံညီရေးသမိုင်းကို ပြောချင်တာပါ၊ အချိန်မရလို့ မြန်မာကဗျာရဲ့ တစေ့စောင်းပဲ ပြောပါမယ်။ အဲ့ဒိတစေ့ တစောင်းကလဲ မိုးမခမှာ တင်ထားတဲ့ ဆရာဦးတင်မိုးရဲ့ ကဗျာနဲ့ပါတ်သတ်လို့ ပြောချင်တာပါ၊ လာဖြစ်တာကလဲ ၁၉၉၆ခုနှစ်တုန်းက ဆရာကြီးကို ကဗျာနဲ့ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတဲ့ ဒေါ်လေးလေးတို့ ကလှမ်းဖိတ်လို့ လုပ်ဖော်ရသားဘဲဆိုပြီး ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်ကို ကံသုံးပါးနဲ့ ပူဇော်ချင်လွန်းလို့ လာခဲ့တာပါ"ဟုဦးသန်းဆွေ(မြေနီကုန်း)က ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲသို့ လာရောက်ဖြစ်ပုံနှင့် ယနေ့လူငယ်များ လေးချိုးနှင့် ကဗျာရွတ်ဖတ်မှု သံနေထံသားတို့ကို သိရှိနားလည်းစေရန် အကျယ်တ၀င့်ရှင်းလင်းပြောဆိုသည်။
မြန်မာပြည် အကျဉ်းထောင်အတွင်း အနှစ် ၂၀ ကျော်ကြာအောင် မတရားအကျဉ်းချခံခဲ့ရသည့် ပြည်တွင်းNLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီတစ်ဦး လည်းဖြစ်သူ သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်မှလည်း အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းများကြားမှ ထောင်အတွင်း ကဗျာသီကုံး ဖွဲ့ဆိုမှုများနှင့် ထောင်နံရံ များပေါ်တွင် ထင်ကျန် စွဲရစ်နေသည့် အမည်မသိ အကျဉ်းသားများ၏ ခံစားရေးဖွဲ့ခဲ့မှု ကဗျာများအကြောင်းကို ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် "ရွှေဒေါင်းတောင် ကလောင်အဖိုးမွေးနေ့ နှင့်ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့" အတွက် ပေးပို့လာသည့် အသံဖိုင်ကို တက်ရောက်လာသူများ ကြားသိအောင် ဖွင့်ပြပေးခဲ့ကြသည်။
ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့ အကြောင်းနှင့်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို ကိုမင်းထက်ဇော်မှ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး စွယ်စုံအနုပညာရှင်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးဝင်းဖေမှလည်း ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့အတွက် အမှတ်တရ စကားသံကိုလည်း ပေးပို့ခဲ့သည်။
ဂျပန်ရှိနံမည်ကျော် ကဗျာဆရာရဲရင့်သက်ဇွဲက နအဖစစ်အုပ်စု၏ မတရား ဖမ်းဆီးထောင်ချမှုကြောင့် အင်းစိန်ထောင်တွင် ၂၈ နှစ် အကျဉ်းချခံနေရသည့် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တဦး၏ နီးသည်က ထောင်ဝင်စာလာတွေ့သည့် အချိန်တွင် ယုံကြည်ချက်နှင့် ဇနီးသည် အနာဂတ်အတွက် ပြောဆိုခဲ့မှုများကို ပြန်လည် ကြားသိခဲ့ရသည့်အတွက် ၄င်း ကိုယ်တိုင် ခံစား ရေးစပ်ထားသည့် "ကြေကွဲ စရာတွေထဲမှာ ငါ့ကိုထားခဲ့"ဆိုသော ကဗျာဖြင့်အဆုံးပိတ် ရွတ်ဆိုခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း။ မူရင်း “ moethaukkye.co.cc ”
တောင်းဆိုချက် အချို့အလျှော့ပေးရန် တရုတ်တိုက်တွန်းချက် ၀ လက်မခံ ။
Monday, 22 March 2010 18:06 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
စစ်အစိုးရအား မူလတောင်းဆိုချက် ၉ ချက် အတိုင်း ပုံသေမသွားဘဲ အလျှော့အတင်ြးုပလုပ်၍ အကြေအလည် ဆွေးနွေးကြရန် တရုတ်တိုက်တွန်းချက်ကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း ၀ ခေါင်းဆောင် အသိုင်းအ၀ိုင်းကပြောကြပါသည်။
“၂၀၀၉ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက် ရက်စွဲနဲ့ ဥက္ကဌကြီး လက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေထဲမှာ ၀ ဘက်က လိုက်လျော ထားတာအများကြီးပါ။ လုံးဝအလျှော့မပေးတာ နအဖဘဲ” - ခေါင်းဆောင်ပိုင်း တဦးက ပြောကြောင်း - ၀ ခေါင်းဆောင်အချို့နှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောပါသည်။
နယ်စပ်ရှုပ်ထွေးမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန် ယူနန်ပြည်နယ်မှ တရုတ်ဆက်ဆံရေးအရာရှိများ ၀ ခေါင်းဆောင်တို့အား ပြီးခဲ့ သည့်အပတ်က တိုက်တွန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“တောင်ပိုင်း ၀ နယ်မြေတောင် တပ်ရုပ်ပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ မိုင်းပေါက် မိုင်းဖျဲန်နယ်မြေဆို ပိုဝေးတာပေါ့၊ အဲဒါ မြောက်ပိုင်း ၀ နယ်မြေရဲ့ အသက်ရှူပေါက်ဘဲ”- ဟု ၀ တပ်မှူးတဦးက လည်းဆို၏။
ထို့အပြင် အဆိုပါ ၀ တပ်မှူးက - အမှတ် ၁၇၁ စစ်ဒေသ တောင်ပိုင်း ၀ နယ်မြေမှ ၀ တပ်ရုပ်ပေးရေး စစ်အုပ်စုလိုလားမှု အပေါ်တရုတ်တို့၏တိုက်တွန်းမှုကို လိုက်လျောပေးရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ တောင်ပိုင်းနယ်မြေအား အသက်ရာထောင်ချီ ရင်း၍ ခွန်ဆာ့လက်မှတိုက်ယူရကြောင်း၊ တောင်ပိုင်းဒေသသို့ ၀ ပြည်သူများ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ စဉ်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ကိုယ်စား ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်က ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ဆန္ဒအရ ပြောင်း ရွှေ့လာခြင်းမဟုတ် ကြောင်း၊ စီးပွားရေးဘက်တွင်လည်း အရင်းအနှီးများစွာ မြုပ်နှံထားခဲ့ရပြီဖြစ်ကြောင်း ဆက်ပြောပါသည်။
သီးခြားအတည်မြုပနိုင်သေးသည့် သတင်းရပ်ကွက်အရ လာမည့် မတ်ခ်ျ ၂၅ ရက်၌ နအဖ နှင့် ၀ တပ်ဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ် များတန့်ယန်းတွင် ထပ်မံတွေ့ဆုံရန် ရှိသည်ဟုဆိုသည်။
၀ တပ်ဖွဲ့ တပ်ရုပ်ဆုတ်ခွါရန် - နအဖ အလိုရှိသော မိုင်းယန်းမြောက်ဘက် မိုင်းပေါက် နှင့် မိုင်းဖျဲန်ဒေသမှာလည်း ၀ နယ်မြေဖွဲ့စည်းပုံအရ ခရိုင်အဆင့်သတ်မှတ်ပြီး တပ်မဟာ ၄၆၈ ၏ ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်၏။ တောင်ပိုင်း ၀ဒေသတွင် လည်း အမှတ် ၁၇၁ စစ်ဒေသ လက်အောက်ခံ တပ်မဟာ ၅ ခုရှိ၏။
၂၀၀၂ ဧပြီ လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ Lahu National Development Organisation ကထုတ်ပြန်သော (Un settling Moves, The Wa forced resettlement in Eastern Shan State ( 1999-2001) အစီရင်ခံစာ အရ ၀ လူထု ၁၂၀,၀၀၀ တောင်ဘက်ပိုင်း (သံလွင်အရှေ့ခြမ်း ထိုင်းနယ်စပ်တလျှောက် မိုင်းဆတ် မိုင်းတုံမြို့နယ်) သို့ပြောင်း ရွှေ့ခဲ့ကြသည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့ဘူးသော်လည်း ၀ အာဏာပိုင်များကမူ လူဦးရေ ၈ သောင်းသာပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် ဟု ပြောပါသည်။
Posted by PNSjapan at 9:52 PM0comments
ပေါက်ပေါက်/ ၂၂ မတ် ၂ဝ၁ဝ
ရှမ်းပြည်အရှေ့မြောက်ပိုင်း၊ ကိုးကန့်ဒေသအတွင်း မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု၊ သေနတ်ပစ်ခတ်မှု စသည့် ဒေသ မတည်မငြိမ်မှုများ ပြုလုပ်နေသည့် အကြမ်းဖက်သမားများ တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်တလျှောက်တွင် သွားလာလှုပ်ရှားနေသဖြင့် ၎င်းတို့အား ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် တရုတ်အာဏာပိုင်များထံ မြန်မာဘက်က အကူအညီ တောင်းခံထားသည်။
ယခုလ (၁၈) ရက်က မူဆယ်မြို့၌ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အာဏာပိုင်များ ဆွေးနွေးပွဲတခုပြုလုပ်ခဲ့ရာ အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် (ရမခ)ဒုတိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းသိန်း ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့က တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အကြမ်းဖက်သမားများနှင့်ပတ်သက်၍ အပြန်အလှန် သတင်းဖလှယ်ကာ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ရေး အကူအညီတောင်းခံခဲ့သည်ဟု ရမခစစ်ဌာနချုပ် သတင်းရပ်ကွက်နှင့် နီးစပ်သူက ပြောသည်။
၎င်းက “အခုလ (၁ဝ) ရက်နေ့က နယ်စပ်မှာ ဖုန်ကျားရှင်အဖွဲ့က ကိုးကန့်တယောက်ကို ဖမ်းမိတယ်။ အဲဒီလူက တာရွှေထန်မှာရှိတဲ့ တပ်စခန်းကို ဝင်ပစ်တဲ့ကိစ္စ၊ ပြီးခဲ့တဲ့လက ဗုံးတွေ ဖောက်ခွဲတဲ့ကိစ္စတွေကို ညွှန်ကြားတဲ့သူလို့ ပြောတယ်။ သူ့ဆီကရတဲ့ သတင်းတွေအရ ဝနယ်ဘက်ကနေ လယ်နက်ခဲယမ်းတွေယူပြီး ကိုးကန့်ဘက်မှာ လာလုပ်တယ်တဲ့။ အကြမ်းဖက်သမားတွေက တရုတ်ဘက်မှာ ခိုအောင်းနေတာလည်း ရှိတော့ အဲလိုတွေ ထပ်မဖြစ်အောင် ဒီဘက်ကလည်း သတင်းပေးမယ်ပေါ့၊ တရုတ်ဘက်က သတင်းရရင်လည်း ဒီဘက်ကို သတင်းပေးပေ့ါ။ အဲလို ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်မယ်ဆိုပြီး ဆွေးနွေးကြတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ (၁၆) ရက် ညပိုင်းက ကိုးကန့်ဒေသ၊ တာရွှေထန်ရှိ နအဖတပ်စခန်းအား ဖုန်ကျားရှင် ဦးဆောင်သည့် ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့က ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်သဖြင့် နအဖတပ်သား (၂) ဦးသေဆုံးကာ (၁) ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သကဲ့သို့ ဖေဖော်ဝါရီလလယ်ပိုင်းကလည်း လောက်ကိုင်မြို့တွင် (၂) ရက်ဆက်တိုက် ဗုံးများ ပေါက်ကွဲခဲ့သဖြင့် တရုတ် နိုင်ငံသား (၃) ဦး အပါအဝင် လူ (၉) ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် (UWSA) ခေါ် ဝတပ်ဖွဲ့အား နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးအတွက် တရုတ်အာဏာပိုင်များက ဖျောင်းဖျပေးရန် နအဖဘက်က ထပ်မံ အကူအညီတောင်းခံထားခဲ့သည်ဟု ရမခစစ်ဌာနချုပ် သတင်းရပ်ကွက်နှင့် နီးစပ်သူက ပြောသည်။
၎င်းက “ဝတွေကို နယ်ခြားစောင့် လုပ်လာအောင် မတ်လ (၃) ရက်နေ့က ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်က ယူနန်အာဏာပိုင်တွေကို စာရေးအကူညီတောင်းခဲ့တယ်။ အခု ရမခကလည်း ထပ်ပြောတာက ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် တပ်မတော်တခုတည်းရှိရမယ်ပေါ့။ အဲဒီအတွက် ဝတွေကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သဘောထားပြီး ဆွေးနွေးနေတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဝတွေက စိုးရိမ်ပြီး စစ်ရေးပြင်ဆင်တာတွေ လုပ်နေတယ်ပေါ့။ တကယ်လို့ ဝတပ်ဖွဲ့က အသွင်ကူးပြောင်းရေးသာ မြန်မြန်လုပ်မယ်ဆိုရင် နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းလာမယ်။ ဒီအတွက် တရုတ်ဘက်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်ဆိုပြီး ထပ်ပြောထားတယ်” ဟု ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်အထူးဒေသ (၁)၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော် (MNDAA) အဖွဲ့ခေါ် ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင် ဖုန်ကျားရှင်အဖွဲ့အား မူးယစ်ဆေးဝါးအမှု၊ လက်နက်မှောင်ခိုမှုတို့ဖြင့် နအဖဘက်က ဖမ်းဆီးရန်ကြိုးစားရာမှ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ပျက်ကာ ယမန်နှစ်၊ သြဂုတ်လအတွင်း နအဖ၏ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
ဖုန်ကျားရှင်ဦးဆောင်သည့် ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားပြီး နောက်ပိုင်း ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ပိုင်စုံချိန် ဦးဆောင်သည့် ကိုးကန့်လက်ကျန်အဖွဲ့အား နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်း အမှတ် (၁ဝဝ၆) အဖြစ် အသွင်ပြောင်းကာ နအဖတပ်များနှင့် အတူ ကိုးကန့်ဒေသအား ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ ခေတ်ပြိုင် ဂျာနယ် မှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဗမာ့နိုင်ငံရေး စာမျက်နှာသစ် (မေးခွန်းများ)။
နအဖက ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေ ထုတ်ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နှင့်တကွ ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး အင်အားစုများအကြား ပါတီ မှတ်ပုံတင်ရေး မတင်ရေးကိစ္စက အခြေအတင် ဆွေးနွေးစရာ တွေ ဖြစ်လာနေပါတယ်။ ရတဲ့အချိန်တို အတွင်းမှာ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချရပါတော့မယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အတွင်းမှာ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်အချို့၊ ဗဟိုအလုပ် ကော်မတီဝင်အချို့က ပါတီ မှတ်ပုံ တင်ရေးကို ဆန္ဒရှိကြတယ်၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစား နေကြတယ်လို့ သတင်းများ ကြားသိနေရပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လည် လွှတ်မြောက်လာချိန်မှာ ပါတီတခု အဆင်သင့် ရှိနေစေဖို့ ဆိုတဲ့ ဓါတ်ပြားဟောင်းကြီး ဖွင့်နေကြပြန်ပါပြီ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဗမာပြည်သူ အားလုံးက လူထုခေါင်းဆောင်အဖြစ် သက်မှတ်ထားပြီးသားပါ။ နဝတ-နအဖတင် မကပါဘူး ဗမာ့နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို အမှန်တကယ် ဖြေရှင်းချင်သူများ အားလုံးက အလေးထား ဆွေးနွေး နေရာပေးရမယ့် ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကို သိချပ်ဖို့လိုပါတယ်။ အတွေးချော် လမ်းမှားလို့မရတဲ့ ဒီလိုအချိန် အခါမှာ ပြည်တွင်း ပြည်ပက ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူများအကြား စိုးရိမ်မှုတွေ တိုးလို့လာနေတာသာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လာရင်၊ ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ ပြင်ဆင် သံတွေ ပျောက်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က သူ့ပါတီအရေးကိစ္စကို ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းတကျ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် သွားပါ့မယ် လို့ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့ အဖွဲ့ချုပ်ကို ပါတီမှတ်ပုံတင်ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မယ်လို့ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့သစ်က ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ဆိုကြပါစို့ ကျနော်တို့ ပြည်တွင်း ပြည်ပက ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူများက မဲပေးသူများ၊ ထောက်ခံ ပံပိုးပေးကြရသူများ ဖြစ်ကြတာနဲ့အညီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ်မှာ ဘယ်လို သဘောထား တုံ့ပြန်ကြမှာလဲ။
သေချာပေါက်နီးပါး ဖြစ်နိုင်တာကတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ခဲ့ရင် ဒီမတရားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ နိုင်ငံတကာ မိသားစုက အစဉ်တစိုက် တောင်းဆိုနေတဲ့ အားလုံးပါဝင်တဲ့ အများ လက်ခံနိုင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတခု အလွယ်တကူဖြစ်သွားနိုင်တာပါ။ ဒီကတဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ တရားဝင်မှုအပေါ် မေးခွန်း ထုတ်ရန်ခက်မယ့် ဒီမိုကရေစီ မကျတဲ့ အစိုးရတရပ် အပေါ် ဘယ်လို ဆန့်ကျင် သွားကြမလဲ။ အလေးအနက် စဉ်းစားကြ ဖို့လိုပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုဝင်ခဲ့ရင် ကျနော်တို့ အားလုံးလည်း မလွှဲမရှောင်သာဘဲ ဒီလမ်းကြောင်းကို လိုက်လျှောက် ရတဲ့ဖြစ် ရောက်လာပါတော့မယ်။ ဒီလို သဘောထားကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ အတွင်းရေးမှုး ဦးအေးသာအောင် ကလည်း သဘောထား ထုတ်ပြန်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ခဲ့တဲ့အနှစ် နှစ်ဆယ်ကလိုပဲ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲရဲ့ ဦးဆောင်အလံကိုင်ပါတီ၊ ဒီမိုကရေစီ လိုလားတဲ့ ဗမာပြည်သူပြည်သားများကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သင်္ကေတ အဖြစ်ဆက်လက် လက်ခံ ထားနိုင်ပါသေးရဲ့လား။ အဖွဲ့ချုပ်လိုပဲ ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ကြမယ့် အခြားပါတီတွေ၊ တသီးပုဂ္ဂလတွေ အပေါ်မှာရော ဘယ်လို သဘောထား ကြမှာလဲ။ ဘယ် အဖွဲ့ကို ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲရဲ့ ဦးဆောင် ပါတီအဖြစ်ရွေးချယ်ပြီး ပြည်သူလူထုက ထောက်ခံလာအောင် ဝိုင်းဝန်း ပံပိုးပေး ကြမှာလဲ။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲရဲ့ ဦးဆောင် အလံကိုင်ပါတီအဖြစ် ရွေးချယ်ပြီး အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများနှင့် လူ့ဘောင်သစ် ပါတီဝင်များရဲ့ သုံးချောင်းထောက် လူငယ်လှုပ်ရှားမှု့များနဲ့ မဲမကွဲရေး ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုက အတိုင်းအတာတခု အထိတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး အပေါ် အထောက်အကူ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ဒီတခါကော အဖွဲ့ချုပ်ကိုပဲ ရွေးချယ်ကြမှာလား။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်ဦးဆောင်ခြင်းမရှိတဲ့ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ဘယ်အတိုင်းအတာ အထိ လက်တွဲလို့ရမလဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ် နှစ်ဆယ်ကိုပြန်လည် ဝေဘန် ဆန်းစစ်ပြီး ရှေ့လျှောက်ရမယ့် လမ်းမှာ လမ်းပိတ် ထိုင်မယ့်သူ၊ ပွဲလန်းတုန်း ဖျာဝင်ခင်းဖို့ ကြံနေကြတဲ့သူတွေကို မရွေးပဲ၊ ပြည်သူကို အမှန်တကယ် မျက်နှာပြုမယ့် သူတွေဖြစ်ပါမှ နှောင်မှာပေါ် ပေါက်လာမယ့် လွှတ်တော်တွင်း၊ လွှတ်တော် ပြင်ပ တိုက်ပွဲတွေကို ဦးဆောင်နိုင်ကြမှာပါ။ ဒီတိုက်ပွဲက ရေရှည်တိုက်ပွဲပါ။ ပြည်သူအပေါ် သစ္စာမရှိတဲ့သူတွေဟာ စစ်အုပ်စုက ဝယ်တဲ့နောက် အလွယ်တကူ ပါသွားမှာပါ။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါတီတခုကိုတည်းကို မဲပေးခဲ့တဲ့အတွက် နဝတ-နအဖရဲ့ ခွဲခြားဖမ်းဆီးမှု့များရဲ့ အောက်မှာ ဗမာပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုး မဖြစ်စေခဲ့တာ၊ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲ အနှစ် နှစ်ဆယ်ကျော် ကြာခဲ့ရတာက သက်သေပါ။ ရွေးကောက်ပွဲ လမ်းကြောင်းကို လိုက်လျှောက် ရတော့မယ်ဆိုခဲ့ရင် ပါတီကိုရွေးတာထက် လူကိုအဓိက ရွေးတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်သင့်သလား၊ မဲမကွဲအောင် ပါတီတခုတည်းကိုပဲ ပေးသင့်သလား မသေချာပေမယ့်၊ သေချာတာ တခုကတော့ ဗမာလူမျိုးဟာ အမှားတခုကို နှစ်ခါမှားမိမှာ သေမတတ် ကြောက်တတ်တာပါ။
တကယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ပါတီမှတ်ပုံ မတင်ဘူးဆိုပါစို့ နအဖက အဖွဲ့ချုပ်ကို ဖျက်ဖို့ ကျိုးစားမှာ၊ ခေါင်းဆောင်အများစုကို ဖမ်းဆီးထောင်ချမှာ မြေကြီးလက်ခတ် မလွှဲပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အရင်တုန်းကလိုပဲ အကုန်မဖမ်းဘဲ လိုအပ်သလောက်ပဲ ဖမ်းပြီး နအဖကြိုးဆွဲရာ ကမယ့် ရုပ်သေး- အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ပါတီ မှတ်ပုံတင်ခိုင်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ခိုင်းတာမျိုးလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေ ဖြစ်လာရင် ဒီမိုကရေစီ လိုလားတဲ့ ဗမာပြည်သူပြည်သားများက ဘာလုပ်ကြမလဲ။ ကိုယ်နီးစပ်ရာ အစုအဖွဲ့များနဲ့ အရေးတကြီး တိုင်ပင်ဆွေး နွေးကြဖို့ လိုနေပါပြီ။
ကိုယ့်အချင်းချင်းကြား အမြင်ခြင်းဖလှယ် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ဆရာဦးဝင်းတင် ပြောသလို “မကြောက်တရား လက်နက်၊ သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး လက်နက်၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး ရည်မှန်းပန်းတိုင် တခုတည်း ချမှတ် ရှေးရှု ရင်ဆိုင် ချီတက်ရေး လက်နက်” ဆိုတဲ့ လက်နက်သုံးရပ်ကို ကိုင်ဆွဲပြီး ဘယ်သူ အလံလှဲလှဲ ကိုယ်မလှဲဘဲ စုပေါင်း တိုက်ပွဲဝင် သွားကြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းများက ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ အမှန်တကယ် ကိုက်ညီခြင်း ရှိမရှိ ဆိုတာကတော့ မဝေးတော့တဲ့ ကာလမှာ အထင်အရှား မြင်ကြရတော့မှာပါ။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ မူရင်း “ မိုးမခ” မျက်မှောက်ရေးရာ - ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
Real Mandalay Thar from chanmyasoe on Vimeo.
မန္တလေး နှစ် ၁၅၀ ပြည့် ပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွင် တစ်ခန်းရပ်ပြဇာတ်အဖြစ် တင်ဆက်ခဲ့သော မန္တလေးသား စစ်စစ်ကြီး တစ်ခန်းရပ်ပြဇာတ်။
“ ဒီတခန်းရပ်ပြဇတ်လေးက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမူ သမိုင်းဝင် အမွေအနှစ်ရှိရာ မန္တလေးမြို့ တော်ကြီးအား နိူင်ငံခြားသား ၀င်ရောက် လွမ်းမိုးသွားသည့် အခြေအနေကို ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေသည့်အတွက် အလွန်ပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် ”
ဗီဒီယို မှတ်တမ်း ။ မူရင်း vimeo.com , by chanmyasoe
မိမိချစ်သော အမိမြေကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ခွဲနေကြသူများအတွက် အမိမြေအမှတ်တရ . . .Youtube ရုပ်သံ( pukiw2h )
မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့က အိန္ဒိယနိုင်ငံ (India) နယူးဒေလီမြို့ (New Delhi) မှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးကို မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သူတွေက ဆန္ဒပြရင်း သံရုံးဝန်းတံခါးနဲ့ နံရံတွေကို ဆေးသုတ်ပြီး ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ မတရားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ ဆန္ဒပြသူတွေက တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ မြန်မာသံရုံးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် ဆန္ဒပြသူ လူငယ် (၇၀) နီးပါးကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထိမ်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မအေးသန္တာကျော်, က တင်ပြထားပါတယ်။
သတင်း ဗီဒီိယို မှတ်တမ်း ။ VOA News
Posted by PNSjapan at 6:19 PM0comments
ဖနိဒါ သောကြာနေ့၊ မတ်လ ၁၉ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၁၄ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အနေဖြင့် ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်သင့်၊ မတင်သင့် အဆုံးဖြတ်မှသည် ပါတီနှစ်ခြမ်းကွဲသွားမည့် အရေး စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ထွက်ပေါ်လာနေသည်။
အဓိက အတိုက်အခံပါတီကြီး၏ ဥက္ကဌ ဦးအောင်ရွှေက ယခုလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းရှိ ပါတီဌာနချုပ်တွင် ပါတီဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွင် မှတ်ပုံတင်ဖို့ စဉ်းစားရန် အဆိုပြုခဲ့သည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှသည် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်သင့် မပြိုင်သင့် ပါတီဝင်ခြင်း အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးပွဲများက ပါတီအောက်ခြေတွင်လည်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
“ဝင်ရေး၊ မဝင်ရေးမှာဘဲ နှစ်ခြမ်းကွဲသွားနိုင်တယ်။ နအဖနဲ့လည်း ညှိရမယ်။ ကိုယ့်အချင်းချင်းလည်း ညှိယူရမယ်။ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေက မှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ ယုံကြည်တယ်” ဟု ပဲခူးတိုင်း အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခင်ညွှန့်မူက ပြောသည်။
သူမကတော့ ရွှေဂုံတိုင် ကြေညာစာတမ်းကို ထောက်ခံသူဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
အန်အယ်ဒီတွင် ပါတီဝင်ဦးရေ ၁၂ သန်းကျော်ရှိသည်ဟု ပါတီပြန်ကြားရေးဌာနက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့မှသည် ရက်ပေါင်း ၆ဝ အတွင်း လက်ရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများလည်း အသစ်ထူထောင်မည့် ပါတီများနည်းတူ မှတ်ပုံတင်ရန် ကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်သော နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအက်ဥပဒေတွင် ဖော်ပြထားသည်။ လက်ရှိတွင် ၁၉၉ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ကျန်ရစ်သော နိုင်ငံရေးပါတီ ၁ဝ ခုရှိရာ အန်အယ်ဒီလည်း ပါဝင်သည်။
အင်းစိန်ထောင်တွင်းမှ သန္ဓေတည်ခဲ့သော ဒီမိုကရေစီလိုလားသော အတိုက်အခံများ၏ ရပ်တည်ချက်မှာ အန်အယ်ဒီ၏ ရပ်တည်ချက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းဟူ၍ ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
ရွှေဂုံတိုင်စာတမ်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန်၊ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအား ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရန်၊ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို တစုံတရာ အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပရန် စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုထားသည်။
၁၉၉ဝ ခုနှစ်များ အစောပိုင်းကာလက ထောင်တွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအကြား အကြိတ်အနယ်ဆွေးနွေးပြီး စု-လွှတ်-တွေ့ ဆိုသော နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက်မူကို သဘောတူညီမှု ရခဲ့ကြသည်။
ဒေါ်စုနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ခြွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးရန်၊ ၉ဝ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲက ရွေးချယ် တင်မြှောက်လိုက်သော ပါလီမန်အမတ်များ လွှတ်တော်ခေါ်ယူရန်နှင့် ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံ အင်အားစုပါတီ ၁ဝဝ ကျော်က လုပ်ခွင့်အာဏာအပ်နှင်းထားသော ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် စစ်အစိုးရဘက်မှ အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သူ ပုဂ္ဂိုလ်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်ဖြစ်သည်။
ပါတီဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်ဆွေကမူ အချုပ်နှောင်ခံနေရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာပါက ပါတီရှိနေမှ နိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ် ဆက်လက်ဦးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်၍ မှတ်ပုံတင်သင့်သည်ဟု ပြောသည်။
“ဝင်ရေး မဝင်ရေး ယတိပြတ် မစဉ်းစားသေးသော်လည်း ပါတီပြန်လည်တည်ထောင်ရေးက သိပ်ကို အရေးကြီးတဲ့အချိန် ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒေါ်စုနဲ့ ကျနော်တို့ တထပ်တည်းရှိတယ်ဆိုတာကို လက်ခံရင် ပါတီရှိနေဖို့ လိုတယ်။ ဒေါ်စုပြန်လာရင် သူပြန်ရောက်လာမှာပါ” ဟု ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောသည်။
ပါတီထိပ်ဆုံးခေါင်းဆောင် အဖွဲ့ဝင် ၂ဝ ဦးပါ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့တွင်လည်း ဥက္ကဌ ဦးအောင်ရွှေ၊ ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းတို့ခေါင်းဆောင်သော အစုက တဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ဦးဝင်းတင်၊ ဦးဥာဏ်ဝင်း၊ ဦးအုန်းကြိုင်တို့ ခေါင်းဆောင်သော အဖွဲ့က တဖွဲ့ဟူ၍ သဘောထားများ ကွဲပြားနေကြသည်ဟု ပါတီတွင်းသတင်းရပ်ကွက်များက ပြောသည်။
ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်ကော်မတီက ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဖြစ်နေသော ပါတီရှေ့ရေးအတွက် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အဖွဲဝင် ၁ဝဝ ပါ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့က ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြရန် ရက်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင် ၁ဝ ဦးမှာ အကျဉ်းကျနေဆဲ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်ကြာ ရပ်တည်နေခဲ့သည့် ပါတီ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်များက ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မည်ဆိုပါက လုံးဝ ရှုတ်ချကြောင်း မကွေးတိုင်းအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ တာဝန်ခံ ဒေါ်ခင်စောဌေး ကပြောသည်။
“စီစီကို အရေးတကြီးဖွဲ့လိုက်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တချို့ကို အန်တီတို့က စိုးရိမ်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ဖို့ မဝင် ဆုံးဖြတ်ဖို့ မဲခွဲတဲ့အခါမှာ စီစီတိုင်းက သတ္တိရှိဖို့ လိုတယ်။ သူတို့က အဖမ်းခံရမှာ ကြောက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ဘက် မဲပေးမှာ အန်တီက ကြောက်နေတာ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် မပေါ်ပေါက်ရေး အတွက် အန်တီတို့ကတော့ ရှုံ့ချတာဘဲ” ဟု သူက ပြောသည်။
ယနေ့တွင် မန္တလေးတိုင်း မိတ္ထီလာမြို့နယ် အန်အယ်ဒီအဖွဲ့ဝင်များက ပါတီအနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရေး မတင်ရေးကို လျို့ဝှက်မဲပေးသည့် စနစ်ဖြင့် မဆုံးဖြတ်ဘဲ ဗြောင်မဲပေးသည့်စနစ် ကျင့်သုံးဖို့လိုသည်ဟု ဗဟိုသို့ စာရေးသားပေးပို့လိုက်သည်။
“နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ချက်က ပြတ်ပြတ်သားသား ပေါ်တင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပါ။ ပြောင်ပြောင်တင်းတင် ပြောဆိုဖို့ တောင်းဆိုမယ်။ ” ဟု ပါတီဝင် ဒေါ်မြင့်မြင့်အေးက ပြောသည်။
သူမမှာ ပါတီတွင်း စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက သာမန်ပါတီဝင်အဖြစ်သို့ အဆင့်လျော့ခံထားရသူဖြစ်သည်။
လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော ပါတီအကြပ်အတည်းသည် ယခင် ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့က ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု မလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဟု သူမက အပြစ်တင်လိုက်သည်။
မကြာမှီ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာသည့် ပါတီ ဒုဥက္ကဌ ဦးတင်ဦး၏ ပါတီ မှတ်ပုံတင်ရေး မတင်ရေး ရပ်တည်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်မှုမရှိသေးသော်လည်း ပြန်လွတ်ခါစက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဦးဆောင်မှုအောက်၌ ရပ်တည်မည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သလို ရပ်တည်ချက် ကွဲပြားနေသော ဘက်နှစ်ဘက်လုံးနှင့် ရင်းနှီးသူလည်းဖြစ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေသည် ရှက်ဖွယ်ကောင်းလှကြောင်းနှင့် ပါတီကို စိန်ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မကြာသေးခင်က သူမ၏ ရှေ့နေများမှတဆင့် ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားသည်။
ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေက ထောင်ကျခံနေသူကို ပါတီဝင်အဖြစ် လက်မခံရန် ကန့်သတ်ထားသည်။
မမျှော်လင့်ထားသည့် အမေရိကန်က ရေကူး၍ ခြံဝင်းအတွင်း ဝင်ရောက်မှုကို ယာယီခိုလှုံခွင့်ပေးရာက နေအိမ်အကျယ်ချုပ် စည်းကမ်းချိုးဖောက်သည်ဆိုကာ ထောင် ၃ နှစ် အပြစ်ပေးပြီးမှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက လျော့ပေါ့ပေးမှုဖြင့် ထက်ဝက်ကို ဆိုင်းငံ့ထားပြီး ကျန် ၁၈ လကို နေအိမ်တွင် ချုပ်နှောင်ရန် ပြင်ဆင်အမိန့်ချခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ထောင်ကျခံနေရသူ မဟုတ်ဆိုသော ငြင်းခုံမှုအချို့တော့ရှိနေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်များတွင် အန်အယ်ဒီပါတီဝင် ၄၃ဝ ကျော်အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၁ဝဝ ကျော်ရှိနေသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေအရ မှတ်ပုံပြန်တင်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီများသည်၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်ခံကာကွယ်ရန် ညွှန်ကြားထားသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ မူရင်း “ mizzimaburmese. News ”